2009/11 - 2009/12 | ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှားရေးအသငျးခြုပျ
Home » Archives for 2009/11 - 2009/12
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 11:29 PM | Dhammasadi | မစိုးရိမ်စာသင်သား | အဓမ္မ၀ါဒဓမ္မစေတီ Be the first to comment!
`ဓမ္မစေတီ´အမည်ရှိခွေပါအမှတ်(၁၅)ပုဒ်၌ ဦးကောသလ္လ’က ဤသို့ ဟောထားပါသည်။
"ဒီနေရာမှာ... ဓမ္မစေတီ ဆရာစဉ်ဆက်တို့ရဲ့ တိဟိတ်လို့ ယူဆပုံကိုလဲ ပြောပါ့မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ... ရှိရှိသမျှ ဆရာတော်များက လဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ `တို့က ဒွိဟိတ်။ ဒီဘ၀တော့ တရားမရနိုင်ဘူး`လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါတယ်။`.ဒါပေသိ-ဘုန်းကြီးများရဲ့ ဆရာတော်ကြီးက စကားတစ်ခွန်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပဋိသန္ဓေတုန်းကတော့ ဒွိဟိတ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဆရာကောင်း သမားကောင်းနဲ့ တွေ့၍ တရား ဘာဝနာလုပ်သောအခါ ပ၀တ္တိမှာ တိဟိတ်ဖြစ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အလွန်ရှားပါးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ ။ `ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က-ဒီနေ့ဝိပဿနာလောကကြီး၊ တရားဓမ္မလောကကြီးအတွက် (အရေးကြီးလှပါတယ်။) ဒီဆုံးဖြတ်ချက်သာမချခဲ့ရင် သူတို့ လူထွက်ကြရတော့မှာ။ မိန်းမယူရတော့မှာ။ ...တို့ဆရာတော်ကတော့ ပဋိသန္ဓေတိဟိတ်၊ ပ၀တ္တိတိဟိတ်။ ဒါ- ကီး။"
"အဲဒါ ပစ္ဆိမဘ၀ိကသားနဲ့ ဗုဒ္ဓလောင်းပါ။ မွေးတုန်းက ဒွိဟိတ်။ ပ၀တ္တိမှာ တိဟိတ်။ အဲဒီဇာတ(မွေးရာပါ) တိဟိတ်ကို ကျုပ်တို့ မသိနိုင်ဘူး။ ကျုပ်တို့ သိနိုင်သည့် တိဟိတ်မှာ ၀ိဇ္ဇာဥာဏ် သမ္မာဒိဋ္ဌိကိန်းအောင် တရားအားထုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များပါ။"
"ဘုန်းကြီးများရဲ့ဆရာတော်တွေကပ၀တ္တိတိဟိတ်ဖြစ်ရင် တရားရတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ ပစ္ဆိမဘ၀ိကသား ဆိုတာ ဒီဘ၀ သောတာပန်မတည်ဘဲ မသေဘူး။ တရားရကို ရတယ်။"
အထက်ပါတို့သည် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်၊ ဆက္ကနပါတ်၊ သီတ၀ဂ်၊ အာဝရဏသုတ်၊ ၀ိဘင်းပါဠိတော်၊ ဥာဏ၀ိဘင်း။ ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ် ပါဠိတော်၊ မဟာဝဂ်။ ပုဂ္ဂလပညတ် ပါဠိတော်။ ထိုထိုအဋ္ဌကထာများ အားလံုးနှင့် ဆန့်ကျင်ြကပါသည်။ အကျယ်သိလိုပါက မြတ်ပန်းရဂုံရုပ်စုံ ဓမ္မစာစောင်၊ အမှတ်-၂၁၁၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၀၉-ခုနှစ်၌ ပါရှိသော အရှင်ကောဝိဒ(ယော)၏ `တိဟိတ် ကိစ္စ´ ဆောင်းပါးကို ရှာဖွေ၍ ဖတ်ရှုကြပါကုန်။ ဤနေရာတွင် လိုရင်းတစ်ချက် လောက်သာ ဝေဖန်လိုက်ရလျှင်
`မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါဠိတော်များ၊ ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ၏ အဋ္ဌကထာများကို ပစ် ပ ယ် ထားသည်´ ဟူ ၍ သာ ဖြစ် ပါသည် ။ အကယ်၍ ပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာတုနင့် ညီညွတ်လျှင် အကိုးအကား အခိုင်အမာ ပြသင့်ပါသည်။
`ဘုန်းကြီးများရဲ့ အာစရိယ၀ါဒ´ဟုသာ ကိုးကားပြ၍ မရနိုင်ပါ။ မှန်၏။ ၄င်းဥက္ကံသဗုဒ္ဓိသည် အဓမ္မ၀ါဒီ ဖြစ်သည်။ ရှေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
မှာထားချက်။ ။ အထက်ပါ တိဟိတ်ဆုံးဖြတ်သည့်အရာတွင် ၀ိဇ္ဇာဥာဏ်-သမ္မာဒိဋ္ဌိ-ကိန်းအောင် တရား အားထုတ်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ သုံးထားပါသည်။ ၀ိဇ္ဇာဥာဏ် သမ္မာဒိဋ္ဌိအရ အဘယ်ကို ယူရမည်နည်းဟု မေးလျှင် အကြောင်းခန္ဓာ (အတွေးပုံရိပ်-ပညတ်)ကို သိမြင်သောဥာဏ် ဟူ၍ ယူရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ၀ိဇ္ဇာဥာဏ် ဟူသည်မှာ မိစ္ဆာဥာဏ်သာတည်း။
"ဓမ္မစေတီ"အမည်ရှိခွေ ပါအမှတ်(၁၇)ပုဒ် ၌ ဦးကောသလ္လက ဤသို့ ဟောထားပါသည်။
"ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀ကတဲက ထေရ၀ါဒလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ မျိုးစေ့ချ၊ စိုက်ပျိုးပေးခဲ့သော အဖေဦးသန်းမြင့်၊ အမေဒေါ်တင်လှ တို့ကို ပထမကျေးဇူးစကား ဆိုပါ၏။ ထိုထေရ၀ါဒမျိုးစေ့ကို ရေလောင်း ပေါင်းသင်၍ ကြီးပွားအောင် သန့်ရှင်းတဲ့ အပင်ကလေး တစ်ပင် ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိကို ဒုတိယကျေးဇူးစကား ဆိုပါ၏။ `ဤ´ "ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာ အရှေ့တောင်အာရှသို့ ရောက်ရှိလာပုံ" ခေါင်းစီးကို အတည်ပြုပေးသော နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ကို တတိယ ကျေးဇူးစကား ဆိုပါ၏။
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ကို အားလုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပထမနေရာမှာ ထားကြတယ်။ ကိုယ် ကတော့ မရဘူး။ မထားဘူး။ ကိုယ်က နဂိုကတည်းက ထေရ၀ါဒကို ကိုယ့်အမေ အဖေက ပေးတာ။
ပြီးတော့မှ သူတို့ သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က `ဟာ ဒီခေါင်းစဉ် သိပ်ကောင်းတာ´လို့ အသိအမှတ်ပြု ပေးတာ။ ဘုန်းကြီးက တောင်းထားတာကို သူတို့က အသိအမှတ်ပြုတာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သူတို့ကို တတိယ နေရာသို့ ပို့လိုက်ပါတယ်"
ဦးသန်းမြင့်+ဒေါ်တင်လှ၊ ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိတို့ ထံမှ ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ ရရှိထားသော ထေရ၀ါဒသည် အဓမ္မ၀ါဒ ဖြစ်သော ထေရ၀ါဒ ဖြစ်သည်။ ယခု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ရရှိထားသော ထေရ၀ါဒသည် ဓမ္မ၀ါဒ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 11:29 PM No comments:
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 11:46 PM | Dhammasadi | မစိုးရိမ်စာသင်သား | အဓမ္မ၀ါဒဓမ္မစေတီ Be the first to comment!
`ပါသာဒိကသုတ်´ အမည်ရှိခွေထဲတွင် ဒုတိယခွေ၌ ဓမ္မစေတီ က ဤသို့ ဟောထားပါသည်။
(က)"ဘုန်းကြီး များက ထေရ၀ါဒ ဒဿနသမ္ပဒါနည်း ဆြုိပီး နည်းတစ်ခုနဲ့ ဟောပါတယ်။ ဒီကနေ့ မြန်မာ တစ်ပြည်လုံး မှာ ၀ိပဿနာလုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ များသောအားဖြင့် ဘာဝနာသမ္ပဒါ နည်းနဲ့ လုပ်နေကြတော့ အကျိုးသတ် သမားတွေဖြစ်ပြီး ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိသမားတွေ ဖြစ်နေကြလို့ သေရင် အ၀ီစိ ရောက်ကြရမယ့် သူတွေချည်း ပါပဲ ။ ဘုန်းကြီးတို့က နဲနဲကလေးပဲ (ဟောမှာပါ။) အကုန်မဟောပါဘူး။ ကိုယ့်ဆရာသမားများက ပေးခဲ့တဲ့...(နည်းတွေပါ။) ဆရာတော် ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိပေါ့။ (အဲဒါ) ဒီဆရာတော် ဦးစန္ဒောဘာသတို့ရဲ့ ဆရာပေါ့။ အဲဒီ ဆရာတော် (ဥက္ကံသဗုဒ္ဓိ)က ပေးခဲ့တဲ့ အရိယသစ္စာနည်းရယ်၊ သတိပဋ္ဌာန်နည်းရယ်၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းရယ်၊ ပဋိသမ္ဘိဒါနည်းရယ်၊ ပဋ္ဌာန်းနည်းရယ်လို့ နည်း(၅)နည်း ရှိပါတယ်။
(ခ) `ဒီတော့ ဒီကနေ့ တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဘုန်းကြီးများက မေးကြည့်ပါတယ်။ လူတိုင်းကို မေးပါတယ်။ ဟေတုပစ္စယော...(ပ)...အ၀ိဂတပစ္စယော။ ဒီ (၂၄)ပစ္စည်းထဲမှာ ယူတယ် လှမ်းတယ်လို့ ပါသလား။ (မပါဘူးဗျ။) မပါဘဲ တရားရတယ် ။ (မှတ်ထား-မှတ်ထား။)
(ဂ) "ဘုန်းကြီး တို့ တရားဟောတာကို သတိပဋ္ဌာန်လည်း မပါဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ဘာလို့ မပါရမှာလဲ။ ငါက သတိပဋ္ဌာန်လဲ ဟောတယ်။ ဓမ္မာနုပဿနာ=ဥပါဒါနက္ခန္ဓာကို ဟောတယ်။ ဓမ္မာနုပဿနာကို ဘယ်လိုရှုလဲဆိုရင် ပဉ္စသုဥပါဒါနက္ခန္ဓသု။ ဒါပဲ။ အခု အဲဒါတွေကို မပြောပါဘူး။ အရိယသစ္စာနည်းက ဓမ္မစကြာက လာတယ်။ သတိပဋ္ဌာန်နည်းက မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်က လာတယ်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းက ပြောစရာ မလိုပါဘူး။ ပဋိသမ္ဘိဒါနည်းကျတော့ ဗမာပြည်မှာ ဟောတဲ့ ဘုန်းကြီးက ရှားပါတယ်။ ဖဿ၌ သိသောဥာဏ်သည် အတ္ထပဋိသမ္ဘဒါ မည်၏။ ဖဿ၏ အကြောင်း၌ သိသောဥာဏ်သည် ဓမ္မပဋိသမ္ဘိဒါ မည်၏။ အဲဒီအထဲမှာ ကေသာ=ဆံပင်ဆိုတာ တွေလဲ မပါပါ။ ယူတာ လှမ်းတာ ကြွတာ တွေလဲ မပါပါ။
(ဃ) `ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ ဦးစန္ဒောဘာသက တရားဟောနေတာ နှစ် ၂၀-ကျော် ရှိပါပြီ။ မှတ်တမ်းတင်ထားတာက မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဦးစန္ဒောဟောသမျှတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ပြောပြီး မှတ်တမ်းတင် ကြရပါတယ်။ ခုဆိုရင် ဦးစန္ဒောဟောထားတာတွေ တော်တော် မှတ်တမ်းရှိလာပါပြီ။`ဒီထေရ၀ါဒဒဿနသမ္ပဒါနည်းနဲ့ ဟောထားတဲ့ တရားခွေကို အပေါ်မှာထားပြီးတော့ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဆရာတော်ကြီးက အောက် က နေ ကျုံ့  ကျုံ့  ကလေးနဲ့  ထိုင်ပြီး နာယူတယ် ။ အဘိဓဇ ဆရာတော်ကြီး တွေက နာယူကြတယ်။ အဲဒါ...။
(င) `ဦးကောသလ္လ’သည် စာတတ်ပါတယ်။ တရားဟောပါတယ်။ ဒါပေသိ-တဏှာကျော့ကွင်းမှလဲ မလွတ်သေးပါ။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကျော့ကွင်းမှလဲ မလွတ်သေးပါ။ ငါက စာတတ်တယ်။ အသက် ၄၀-နဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ မာနကျော့ကွင်းမှလည်း မလွတ်သေးပါ။ ခုချန်ထိတော့ ချောတိုင်ထိပ်မှာပဲ ရှိတယ်။ ချောတိုင်ပေါ်က လျှောမကျသေးပါဘူး။ `ဦးစန္ဒောဘာသ' က ဘုန်း ကြီး တို့ ဆရာပါ။ ဆရာတော် ဦးသောဘနဆိုတာလဲ ဆရာသမားပါပဲ။
"မယံ၊ တပည့်တော်=ထေရ၀ါဒီတို့ သည်။ တဏှာပါသေဟိ၊ လိုချင်တဲ့ တဏှာကျော့ကွင်းတို့မှလည်း။ ၀ိမုစ္စန္တိ၊ လွတ်ကြပါကုန်၏။ ဒိဋ္ဌိပါသေဟိ၊ အယူမှားတဲ့ ကျော့ကွင်းတိုမှလည်း။ ၀ိမုစန၊္တိ လွတ်ြကပါကုန်၏။ မာနပါသေဟိ၊ ...။ ဣဿမစ္ဆရိယ ပါသေဟိ၊..." ဦးကောသလ္လကို ကြည့်။ ဦးကောသလ္လ’က ကျော့ကွင်းတွေထဲမှာ မရှိဘူး။ လွတ်ကင်းနေတယ်။
(စ) "ဟိုလွန်လေပြီး သော ၂၆-နှစ်လောက်က ရေမြုပ်တဲ့အထဲမှာ ထေရ၀ါဒတရားတွေကို ကျားကုတ်ကျားခဲ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးစန္ဒောဘာသကို ရှိခိုးပါတယ်။ ဦးစန္ဒောဘာသဆိုတာ...မြောက်ဥက္ကလာမှာ ဘုန်းကြီးတယ်။ ဒီဂုဏ်တွေကို ရှိမခိုးပါဘူး။ `ဦးကောသလ္လ’ဆိုတာကလဲ ငမိုးရိပ်ချောင်းဘေးက သဲတောထဲမှာ ဦးစန္ဒောတို့၊ ဦးရှမ်းတို့၊ တရားသင်တန်းလာတက်ကြတဲ့ ဆရာတော်တွေ၊ ဒီဆရာတော်တွေရဲ့ ထွေးခံဆေးရင်း ကြက်သွန်လှီးရင်း ထေရ၀ါဒကို ရခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပါ။
(ဆ)"အခုဆိုရင် ဆရာတော်ဦးဣန္ဒောဘာသ မရှိတော့ဘူး။ ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိ မရှိတော့ဘူး။ ဆရာတော် ဦးဧသိက မရှိတော့ဘူး။ ဘုန်းကြီးတို့အလှည့် ရောက်လာပါပြီ။ ဘုန်းကြီးဆိုလိုတဲ့ သဘောကို ခင်ဗျားတို့ သဘောပေါက်ပါတယ်နော်။ ထေရ၀ါဒ သာသနာတော်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ တည်ထောင်ရပါတယ်။ ဆရာတော် ဦးနာရဒ ဆိုရင် "ညစာခိုး စားတယ် ။ ဒကာမနဲ့ တွဲသွားတယ်" လို့ ဆရာကြီး (ဦးမြင့်သိန်း)ဆီ တရားလိုက်တုန်းက အပြောခံရတယ်။ အံမယ်လေး။ တို့လဲ အပြောခံ ရတာပဲ။ အဲသလိုမျိုး ခက်ခက်ခဲခဲ တည်ထောင်ခဲ့ရတဲ့ထေရ၀ါဒသာသနာတော် ကြီး ...။ အခု ထိုက်သင့်သလောက်ပေါ့။ ပြန့်သင့်သလောက်လဲ ပြန့်ပါတယ်။ ပွားသင့်သလောက်လဲ ပွားပါတယ်...။
အဲဒါကြောင့်မို့ မပယ်သင့် မပယ်ထိုက်တဲ့ခန္ဓာကို ပယ်ရင်သတ်ရင် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တယ်။ ပယ်သင့်ပယ်ထိုက်တဲ့ခန္ဓာကို လက်ထဲမှာ သိမ်းထားရင် သဿတဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တယ်။
(က)၌ အဓမ္မ၀ါဒဖြစ်သော ထေရ၀ါဒ ... နည်းဟု မှတ်ပါ။မြန်မာပြည်ရှိ တရားသမားတွေအရ မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး၊ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၊ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး တို့ပါ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိသမားများဖြစ်၍ အ၀ီစိကျ-ဟု ဆိုထားပါသည်။
(ခ)ဖြင့် မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်လာ ကာယာနုပဿနာ-ဣရိယာပထပဗ္ပနှင့် သတိသမ္ပဇညတို့ကို ပယ်ချထားသည်။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတွေကို ဖျက်ဆီးသူပါလား။
(ဂ)၌ ဓမ္မာနုပဿနာကို ဥပါဒါနက္ခန္ဓာဟု ဆိုထားရာ ၄င်းဥပါဒါနက္ခန္ဓာဟူသည် အတွေးပုံရိပ်(ပညတ်)ကို ဆိုလိုခြင်းကြောင့် အမှားသာတည်း။ ပဋိသမ္ဘဒါနည်းမှာ သာသနာနှစ် ၁၀၀၀- အတွင်း မှာသာလျှင် ရှိကောင်းသောနည်း (၀ါ) ပဋိသမ္ဘိဒါဥာဏ်ဖြစ်၍ အရိယာဖြစ်သူသည် ပါရမီကြီးသူဖြစ်၍ သာသနာနှစ် ၁၀၀၀-နောက်ပိုင်းမှာ မရှိနိုင်တော့ပြီဟူ၍ အင်္ဂုတ္တိုရ်အဋ္ဌကထာ (ပ-အုပ်၊၆၇။ဋီကာ-ပ-အုပ်၊ ၁၁၈)တို့၌ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မစေတီတို့၏ ပဋိသမ္ဘိဒါနည်း အယူဝါဒများ အားလုံးသည် အသက်မပါသော ကိုယ်သာတည်း။ ထုိ့ကြောင့် မြန်မာပြည်က ကျားသေကို အသက်သွင်းမှု မပြုဘဲ လက်ခံရုံသာ လက်ခံပါသည်။ ဤ(ဂ)ဖြင့်လည်း မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်လာ ဒွိတ္တိံသကာယနှင့် ဣရိယာပထတို့ကို ပယ်သည်။
(ဃ)၌ ဆရာတော်ကြီး များကို အလွဲသုံးစားပြု၍ လူတို့ကို လှည့်စားထားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဘွဲ့အမည်၊ ကျောင်းတိုက်၊ မြို့ရွာ ရပ်ကွက် အတိအကျဖြင့် ပြောမှသာလျှင် ယုံလောက်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘွဲ့ရဆရာတော်ကြီးများသည် (ပညာတတ်ဖြစ်လျှင်) အဓမ္မ၀ါဒတို့ကို မနာကုန်ရာ။
(င)တွင် `ကျော့ကွင်းတို့မှ မလွတ်သေးပါ။ ....ကျော့ကွင်းတို့မှ လွတ်ပါသည်´ ဟူ၍ ဟောထားရာ ဘယ်လောက်များ ရှေ့နှင်နောက် တည့်နေပါသနည်း။ ပိဋကတ်သုံးပုံ ဆောင်နိုင်လျှင် တိပိဋကဘွဲ့ ရရှိအောင် ၀င်ပြန်လိုက်ပါတော့လား။
(စ) ဖြင့် ဓမ္မစေတီတို့၏ ထေရ၀ါဒသည် သင်္ဂါယနာ(၆)တန်ဝင် ထေရ၀ါဒ-မဟုတ်-ဟု ပြသည်။
(ဆ)၌ အထူးရှင်းပြစရာ မရှိပါပြီ။ အဓမ္မ၀ါဒဖြစ်သော ထေရ၀ါဒအဖွဲ့ အစည်းအကြောင်း သတင်းစကားမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းက မည်သို့ လုပ်ဆောင်နေကြသနည်း။ "ဆရာတော် ဦးနာရဒ ဆိုရင် `ညစာခိုးစားတယ် ။ ဒကာမနဲ့ တွဲ့သွားတယ် လို့ ဆရာကြီး (ဦးမြင့်သိန်း)ဆီ တရားလိုက်တုန်းက အပြောခံရတယ်။ အံမယ်လေး။ တို့လဲ အပြောခံ ရတာပဲ။"
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 11:46 PM No comments:
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 1:14 AM | မစိုးရိမ်စာသင်သား | အဓမ္မ၀ါဒဓမ္မစေတီ2Comments so far
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်ဟောပြထားသည့် ဒဿနသမ္ပဒါ ၈-ချပ်တို့ထဲက အမှတ်(၅)၌ ဤသို့ ပါရှိကြသည်။
(က) ကျွန်ုပ်က ဆရာညွန့်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်က ဂိုအင်ကာတို့ရဲ့ တတိယဆရာ။ (မာစတာအော့ဖ်မာစတာ)။ ပါဠိလိုဆိုရင် အာစရိယပါစရိယပါ။ မြန်မာလိုကျတော့-ဆရာ့-ဆရာရဲ့ ဆရာ။ ဒါပေသိ ကံမကောင်း အကြောင်းမသင့်ခဲ့တော့...။ ဗမာပြည်မှာ အဲသလိုမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
(ခ) ဓမ္မစေတီတရားက လွယ်လွယ်နဲ့ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်က လွယ်လွယ်နဲ့ မပေးဘူး။ ပေါသွားမှာစိုးလို့။ မြန်မာပြည်မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေဟာဒီလိုပဲ ပျောက်ကွယ်တတ်ပါတယ်။ အခု ဟောတော့မယ့် ဒဿနသမ္ပဒါနည်းဟာလဲ ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲ ရှာရှာဖွေဖွေ ရှာရပါတယ်။ ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီဆရာကြီး ဦးညွန့်။ ဦးညွန့်ရဲ့တပည့်က ဆရာသက်ပါ။ ဓမ္မာစရိယဦးဌေးလှိုင်က “ဦးညွန်ဆိုတာ ဖိုဝင်တောင်လူသူတော်ဆရာကြီး ။(သူက ပုတီး ဆရာကြီး မျှသာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် လုိ့ ရေးလိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တိုင်းပြည် ဒုက္ခရောက်သွားပါတယ်။ အဲသလိုနဲ့ ဆရာညွန့် မြုပ်သွားတယ်။ ဖိုဝင်တောင်နားမှာ ဆရာကြီး ဦးညွန့်က လူဝတ်ကြောင်နဲ့ ဓာတ်တော် ကျခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်တော်စေတီ တည်ခဲ့ပါတယ် ။
“ထဘီပုဆိုးဝတ်၍ ဓာတ်တော်ကျနိုင်ပါတယ်” ဆိုတာကို ဒီ ဆစ်ဒနီ မြို့မှာ ဓမ္မစေတီ ဦးကောသလ္လ ဟောခဲ့ ပါတယ် ။ (ဆရာကြီးဦးညွန့်ရဲ့ ပုတီးစိပ်နည်းအတိုင်း)သာကေတမှာ ကျုပ်က တစ်ရက်- ပုတီးပတ်ရေ ၂၀၀-ကျော်လောက် စိပ်ခဲ့ပါတယ်။
(ဂ) အဲဒီနည်းနဲ့ ဘိုးတော်သန်းလှဆိုတာ ဖိုဝင်တောင်မှာ ပုတီးစိတ်ပြီး အောင်မြင်ပါတယ် ။ သူ့ကို န၀တက လက်ထဲ ထည့်သွားပါတယ်။ ဒီကနေ သူက ဆရာညွန့်ရဲ့ ရုပ်တုတော်ကြီးကို ဘိုးတော်အောင်မင်းခေါင် အဖြစ် ပြောင်းထည့် လိုက်တယ်။ ဆရာညွှန့် ပျောက်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာညွှန့်ရဲ့ ဓာတ်တော်စေတီကိုလဲ “ဘိုးတော်သန်းလှ- နေလစေတီတော်” လို့ ဆိုပြီးတော့ ပြင်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါက ပထမတစ်ယောက်ရဲ့ မှားယွင်းချက်ပါ။
(ဃ) ဒုတိယတစ်ယောက် မင်းသိင်္ခရောက်လာပြီး အဲဒီမှာအဓိဋ္ဌာန်ဝင်ပါတယ်။ အောင်မြင်သွားပါတယ်။ အောင်မြင်သွားပြီးတော့ သူက “ဧကံ သ ဗျာကရဏစေတီ”လို့ ထပ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာကြီး ဦးညွန့်ရဲ့ ဓာတ်တော်စေတီက တတိယနာမည် ရသွားပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အဲဒီနားက ကျောင်းဆရာတော်အား လျှောက်ထားခဲ့ ပါတယ်။ “အရှင်ဘုရား-အဲဒီစေတီကို ဖျက်ပစ် လိုက်ပါ ဘုရား။ အရိယာ သူတော်စင်ကြီး တစ်ပါး- ပရိနဗ္ဗာန်စံပြီးတော့ ဓာတ်တော်ကျတဲ့ ဒီလိုနေရာမှာ မဟာယာနတွေကနေ အပိုလုပ်တာတော့ ရင်နာစရာကောင်းတယ်”လို့ ဘုန်းကြီးက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဖျက်တာမဖျက်တာက အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ တာဝန်။ သမိုင်းအမှန်ကို ပြောတာက တပည့်တော်ရဲ့ တာဝန်။
(င) ဒီလိုဆိုရင် အဲဒီဆရာကြီး ဦးညွန်က (ယခုအသက်-၉၉ နှစ်)-ဘုန်းကြီးကို တွေ့ချင်တယ်-တဲ။ ပင့်ပါတယ်။ သူက မုံရွာမှာနေတာ။ ကျွန်ုပ်က နောက်ဆုံးတပည့်ပါ။ ကောသလ္လက ဒီတရားတွေ ဟောနေတယ် ဆိုတော့... ငါဟာ ဆရာကြီး ဦးညွန့်ရဲ့တပည့်ပါ။ လယ်တီဆရာတော်ဘုရား ကတောင်မှ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုညွန့်ကလဲကွာ-ဆိုပြီး သြချလောက်ပါတယ်။ ဦးညွန့်ဟာ အဲသလောက်အထိ ၀ိပဿနာ ထိပ်တန်းရောက်ပါတယ်။အခု(၂၀၀၇ ခုနှစ်)မှာ ရှိပါသေးတယ်။ ဘုန်းကြီး (ကောသလ္လ)နဲ့ ၁၉၉၆-ခုနှစ်မှာတွေ့တော့ ဦးညွန့်က ၉၇-နှစ် ပါ။ အဲဒီမုံရွာနယ် တစ်နယ်လုံးမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းလဲ မသွားဘဲ ဘုရားလဲမသွားဘဲ ဆရာညွန့် ဘက်လှည့်ပြီး “ဒီနေ့ ဥပုသ် ဆောက်တည်ထားပါတယ်” ဆိုရင် အဲဒီမုံရွာနယ်မှာ တစ်နယ်လုံး ...။
(စ) ကျွန်ုပ်-ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဒီလောက်ဆိုရင် သဘောပေါက် လောက်ပါပြီ။ အဲဒီဆရာကြီးဦးညွန့်ရဲ့ ၀ိပဿနာတွေပါ။ အဲဒီဆရာကြီးရဲ့ နည်းစနစ်တွေပါ။ ကျမ်းအနေနဲ့ကတော့ “ပညာနေတ္တိ ၀ိပဿနာကျမ်း” လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီကနေ ဒဿနသမ္ပဒါနည်း လာတာပါ။
(ဆ) ဦးသြဘာတို့ ဦးဖိုးရှမ်းတို့ ဦးစန္ဒိမာတို့ဆိုတဲ့ ဆရာတွေဟာ ဘုန်းကြီး(ဦးကောသလ္လ’)နဲ့ ပညာသင်ဖက်တွေပါ။ သူတို့က အခု ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ အသက် ၇၅၊ ၇၄-တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ ၁၃၄၁-၁၃၄၅-မှာ ကျွန်ုပ် ၀ိပဿနာလုပ်တဲ့အခါမှာ သူတို့က အနိမ့်ဆုံး ဘုန်းကြီးက ၂၈-၀ါ၊ ၅၈-နှစ်ပါ။ အခု ဦးစန္ဒိမာက-၆၉။ ဒီ ဦးကောသလ္လက သူတို့သင်ပြသမျှ အကုန်မှတ်မိတယ်။ အခုလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီဒဿနသမ္ပဒါနည်း ဆိုတာက ကျွန်ုပ်သည် နောက်ဆုံးကျည်ဆန်ပါ။ ကျွန်ုပ်သေပြီးရင် အဲဒီနည်းတွေက ပျောက်သွားမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်နဲ့အတူ ၀ိပဿနာသင်တန်း တက်ခဲ့သော အနိမ့်ဆုံးဘုန်းကြီးက-၇၀။ ဖိုးရှမ်းဆိုရင်-၈၀။ ကျွန်ုပ် မရှိပြီးရင် “ဤဒဿနသမ္ပဒါနည်းသည် ဤမြန်မာပြည်မှ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ပျောက်ကွယ်သွားမယ်”။ ဒါကြောင့်မို့ ခင်ဗျားတို့ သေသေချာချာ နားထောင်ပါ။
(ဇ)၀ိပဿနာအားလုံးကိုယ် ကြားဖူးထားတဲ့ အရာအားလုံး အဲဒါတွေကို ခဏဖယ်ထားလိုက်ပါ။ အခုဒဿနသမ္ပဒါနည်း ကိုဟောပါ့မယ်။ (ပ)ကျုပ်ဆရာတော်ကြီး ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိ ပြောတာကတော့ “ဘုန်းကြီးတွေက-ကွ။ သူများလှူတာတန်းတာတွေ စားပြီး သိပ်နှမြောတာပဲ။ သူခိုးက နွားကျားကြီးကို နှမြောတယ် ဆိုတာ အဲဒါပဲ”တဲ။ “..သူများကိစ္စထဲ ၀င်မရှုပ်နဲ့။ သီလရှင် ကျေနပ်ရင် ဇရပ်ပဲကျိုးကျိုး ဗန်းပဲပျောက်ပျောက် . ..”တဲ့။ “ဟေ့ကောင် ကောသလ္လ’တဲ့။ ဒီနေ့ ၀ိပဿနာ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေက ခါးတောင်းကျိုက်- တလွဲ၊ တင်တလွဲ” တဲ့။ တတိယနည်း ကတော့ ယုဂနဒ္ဓနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစုံနည်း၊ တစ်ပြိုင်နက်နည်းပါပဲ။
အထက်ပါ (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င၊ စ၊ ဆ၊ ဇ)အမှတ်ပြတို့သည် ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ၏ နှုတ်ထွက်စကား စစ်စစ်များ ဖြစ်ပါ သတည်း။
(က)ကို ပြန်ဖတ်ပါဦး။ ယင်း(က)ဖြင့်ဓမ္မစေတီဥိးကောသလ္လ’သည်(ဂိုအင်ကာရဲ့ ဆရာက ဦးဘခင်၊ ဦးဘခင်ရဲ့ဆရာက ဦးသက်။ ဦးသက်ရဲ့ဆရာက ဦးညွန့်ဖြစ်၍)အနာဂါမ်ဆရာသက်ကြီးနှင့် အဆင့်တူဖြစ်သည်။ ဤကား(၁)ချက်။
(ဦးညွန့်ရဲ့ တပည့်က ဦးသက်။ ဦးသက်ရဲ့တပည့်က ဦးဘခင်။ ဦးဘခင်ရဲ့တပည့်က ဂိုအင်ကာဖြစ်၍) ဦးကောသလ္လ’သည် ဂိုအင်ကာ၏ အဘိုးအဆင့်မှာ ရပ်တည်သူဖြစ်သည်။ ဤကား (၁)ချက်။
ဦးကောသလ္လ သည် ဦးဘခင်၏ ဆရာအဆင့်မှာ ရပ်တည်သူ ဖြစ်သည်။ ဤကား(၁)ချက်။
ဤအချက်ကြီး(၃)ချက်တို့ကို ပြပါသည်။ မှန်-မမှန် အဖြေရှာသင့်ပါသည်။ ပြောတိုင်း မယုံသင့်ပါ။ မှန်လှ၏။ အနာဂါမ် ဆရာသက်ကြီး၊ ဆရာကြီးဦးဘခင်၊ ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာတို့သည် အတ္ထုပ္ပတ်အားဖြင့် ထင်ရှားကြသူများဖြစ်၍ လေ့လာလျှင် လက်လှမ်းမီသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ စာရေးသူ နားလည်သည့် အတိုင်း ဆိုရလျှင် “ဦးညွန့်၏ တပည့်ဦးသက် ဟူ သော အချက်သည် အမှားကြီးသာတည်း။ ကျေးဇူးရှင်လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ် ကျမ်းကြီး ၌ ရှုကြပါလေ။
ဦးသက်သည် ( မသိသေးသူ - နားမလည်သေးသူ -ငယ်စဉ်ကာလအတွင်းမှာ) ဦးညွန့်ထံ တပည့်ခံဖူးကောင်း ခံဖူးပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဦးသက်က ဦးညွန့်ကို သူ၏ဆရာဟူ၍ အသိအမှတ်မပြုကြောင်း ထင်ရှားလှပါသည်။အချုပ်ကတော့ ဦးညွန့်သည် အနာဂါမ်ဆရာသက်ကြီး၏ ဆရာမဟုတ်။ ဦးဘခင်၏ ဆရာ့ဆရာ-မဟုတ်။ ဦးဂိုအင်ကာ၏ ဆရာ၏ ဆရာ့-ဆရာ (တတိယဆရာ)မဟုတ်ပါ ဟူသတည်း။ ဦးကောသလ္လသည် ဆရာသက်ကြီးနှင့်ဆရာတူဖြစ်သော အဆင့်တူမဟုတ်ပါ ဟူသတည်း။
(က) အမှတ်ပြမှာပါသော ကံမကောင်းပုံ၊ အကြောင်းမသင့်ပုံ၊ ဗမာပြည်မှာ အဲသလိုမျိုးတွေရှိပုံ များကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ထြုိ့ပင်(ခ)ကို ပြန်၍ဖတ်ပါဦး။ ယင်း(ခ)ဖြင့် ဦးညွန့်သည် ပုတီးဆရာကြီး ဖြစ်သည်။ ဦးကောသလ္လ သည် ပုတီးဆရာ ဖြစ်ခဲ့သည် ဟူ၍ ပြပါသည်။
ရှေ့ပိုင်း ဆောင်းပါးများအရ အဆိုပါဦးညွန့်၊ ဦးကောသလ္လ’တို့၏ ထေရ၀ါဒ အယူဝါဒများသည် တန်ဖိုးရှိသောအရာများ မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ယင်း(ခ)၌ပါသော မှတ်တမ်းကိုကြည့်လျှင် ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင်သည် ဤကိစ္စအတွက် မြန်မာပြည်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို ကျေးဇူးပြုခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ သူ့စကားအတိုင်း ဆိုရလျှင် တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ခဲ့သူ ပါတကား။
(ခ)အမှတ်ပြဒုတိယပိုင်းတွင် ဦးညွန်သေပြီး ဓာတ်တော်ကျ ဟုဆိုကာ
(ဃ)အမှတ်ပြထဲတွင် ဦးညွန့်ပရိနိဗ္ဗာန်စံ- ဟုဆိုထားသည့်အတွက် ဦးညွန့်သည် လူဝတ်ဖြင့်ရဟန္တာ ဖြစ်နေသူတည်းဟု ဆိုပါသည်။ ရဟန္တာ ဖြစ်ကြောင်း မဂ္ဂသစ္စာသည် ပုတီးစိပ် မဟုတ်ပါ။ ပုတီးစိပ်၍ ရဟန္တာမဖြစ်ပါ။ ဦးညွန်သည် ပုတီးသမားသာ ဖြစ်ကြောင်းမှာ သေချာပါသည်။ ဦးကောသလ္လ ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ဦးညွန့်နည်းအတိုင်းလိုက်၍ ပုတီးသမားပင်တည်း။ ဒွယနိဿိတ ပကာသနီကျမ်း နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဤပုတီးဂိုဏ်း၏ သမိုင်းများ ပါရှိကြသည်။ အကယ်၍ ပုတီးစိပ်မှုဖြင့် ရဟန္တာဖြစ်လျှင် ယင်းရဟန္တာ(ဦးညွန့်)သည် မဟာယာနလာ ရှင်ဥပဂုတ်၏ ညီကလေးသာ ဖြစ်ပါသည်။ မဟာယာနလာ ရှင်ဥပဂုတ်သည်လည်း ၀ိပဿနာ မဂ္ဂသစ္စာ မရှိသူဖြစ်၍ ရဟန္တာမဟုတ် သာတည်း။ မဟာယာနဂိုဏ်းဝင် မောင်ညွန့်သည်လည်း ၀ိပဿနာမဂ္ဂသစ္စာ မရှိသူ(၀ါ)ပုတီးသိဒ္ဓိ ဖြည့်ကျင့်နေသူ ဖြစ်၍ ရဟန္တာမဟုတ်သူ ပေတည်း။
ထေရ၀ါဒအစစ်မှာမူ လူဝတ်ဖြင့် ရဟန္တာဖြစ်လျှင် ဖြစ်သည့်နေ့မှာပင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ရမြဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးညွန့်သည် ရဟန္တာဟု ဆိုလျှင် ဦးညွန့်သည် (၁၉၉၆)တိုင်အောင် အသက်ရှင်နေသူဖြစ်ခြင်း ကြောင့် မဟာယာနရဟန္တာ(၀ါ) မဟာယာန ရှင်ဥပဂုတ်၏ ညီကလေး ရဟန္တာ(၀ါ) မဂ္ဂသစ္စာမရှိဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြစ်နေသော ရဟန္တာ-ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဦးကောသလ္လ၀ါဒီ(အဓမ္မ၀ါဒီဖြစ်သော)ထေရ၀ါဒ ဆိုင်းဘုတ်တင်တရား လိုက်စားသက်ဝင်သူများ ဟူ၍ ဖြစ်လာကြပါသည်။ဦးညွန့်၊ ဦးမြင့်သိန်း၊ ဦးကြိုင်တုိ့၏ ဆရာများမှာ “ဒီပဲယင်းကျောက်စာတိုင်ရွာက ကျောက်စာတိုင်ဆရာတော်၊ ဓမ္မစေတီဆရာတော်၊ ဓမ္မစကြာဆရာတော် အမည်ခံ လူသေလူဖြစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဂျပန်နိုင်ငံက မဟာယာနဆရာကြီး ဒီ-တီ-ဆူဇူးကီး၊ ဆိုဟာကူအိုဂါတာ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက မဟာယာနဆရာကြီး စရခ်မတ်ဟန့်ဖရေး၊ ဆရာကြီး အယ်လင်ဝက်၊ ဘယ်ဂျီယံ နိုင်ငံကမဟာယာနဆရာကြီး ရောဘတ်လက်ဆင်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံက မဟာယာနဆရာကြီး ခရစ်ရှနမူသီး-စသူများ” ဖြစ်ကြပါသည်။
ဤနာမည်စဉ်များကို “အရိယသစ္စာလမ်းစဉ် ၀ိပဿနာတရား မှတ်ချက်ပေါင်းချုပ်” အစ ပန်ကြားလွှာမှာ အပြည့်အစုံ တွေ့ရပါသည်။အချုပ်ကိုဆိုရလျှင် ဦးကောသလ္လ’ သည် မဟာယာန၀ါဒီသာတည်း။
အမှတ်(ဂ)(ဃ)တို့မှာ သတင်းပေးမှုသက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အံ့ဖွယ်တစ်ခုမှာ မဟာယာန၀ါဒီဖြစ်သော ဦးကောသလ္လက ဘိုးတော်သန်းလှ၊ ဘိုးတော်မင်းသိင်္ခတို့ကို မဟာယာနတွေ ဟုဆိုကာ ပယ်ချထားချက်ပင်တည်း။ ဤ၌လည်း အောင်မြင်သူတို့ကိုပြ၍ နာမည်ယူခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ထင်ရှားပုံမှာ ဘိုးတော်သန်းလှသည် ဆရာညွန့်ကို ဆရာမထားဘဲ အောင်မင်းခေါင်ကို ဆရာထားသူဖြစ်သွားသည်။
မင်းသိင်္ခကတော့ ဗေဒင်ဆရာပင်။ ထို့ကြောင့် နာမည်ယူမှုသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
ထို့ပြင် (င)ကို ပြန်၍ဖတ်ရှုပါ။ ယင်း(င)ဖြင့် ဦးကောသလ္လ သည်ဆရာကြီးဦးညွန့်၏ နောက်ဆုံးတပည့် ဖြစ်သည်(၀ါ) ဦးကောသလ္လ၏ ထေရ၀ါဒဆိုသည်မှာ ဆရာကြီးဦးညွန့်၏ ၀ါဒဖြစ်သည်ဟူ၍ သိစေပါသည်။ ထေရ=ပုဆိုးဝတ် ဆရာကြီး ဦးညွန့်၏။ ၀ါဒ=မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ တရားတို့ကို ပျက်အောင်ဖျက်သော ၀ိပဿနာအတု တရားစုပေတည်း။
ဤသို့ သာလျှင် ထေရ၀ါဒပုဒ်က အဓိပ္ပာယ်ရနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဦးကောသလ္လ’၏ ထေရ၀ါဒသည် ပုဆိုးဝတ်မထေရ် ဦးညွန့်၊ ဦးမြင့်သိန်းတို့၏ ၀ါဒဖြစ်သည် ဟူ၍ ဆိုခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤ(င)၌လည်း နာမည်ကြီးလှသော လယ်တီဆရာတော်ကြီးကို အသုံးပြု၍ နာမည်ကောင်း-ယူထားပါသည်။ မုံရွာနယ်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းလဲ မသွားရဘဲ ဘုရားထံမှလဲ မခံယူရဘဲ ဥပုသ်စောင့်၍ ရနိုင်သော ထေရ၀ါဒ ရှိနေသည်ဆိုတာ အံ့သြစရာ ကောင်းလှပါသည်။ ယင်းဥပုသ်မျိုးသည် ထေရ၀ါဒအစစ်တို့ ကျင့်သုံးခံယူသော ဥပုသ်မျိုး မဟုတ်ဟူ၍ မှတ်ကြရမည်။
ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ’၏ ဆိုလိုရင်းမှာ ဤသို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပုသ်စောင့်မှုဟူသည် ဘုရားထံမှ၊ သို့မဟုတ် ဘုန်းကြီးထံမှ ခံယူရ စမြဲသာတည်း။ သို့ဖြစ်၍ ဦးညွန့်ရှိရာ မျက်နှာမူလိုက်ပြီး ဥပုသ်ခံယူလျှင် ဦးညွန့်သည်ပင်လျှင် ဘုရားဖြစ်ပေသတည်း၊ သို့မဟုတ် ဦးညွန့်သည်ပင်လျှင် ဘုန်းကြီး ရဟန်း ဖြစ်ပေသတည်းဟူ၍ ဆိုလိုပါသည်။
အလွန်ကြောက်စရာကောင်းလှသော စကားပေတည်း။ ဗုဒ္ဓသာဝက၊ ထေရ၀ါဒီအစစ်တို့ အနေဖြင့်လုံးဝ မဆိုဝံ့သောစကား ဖြစ်ပါသည်။ မဟာယာနတို့ကတော့ ဘုရားချည်းဖြစ်ကြသကိုး။
ထို့ပြင်(စ)ကို ပြန်၍ဖတ်ရှုပါ။ (စ)ဖြင့် ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လကသူက ဘယ်သူလဲတဲ့။ ဖြေလိုက်ကြပါတော့နော်။ “ပညာနေတ္တိ ၀ိပဿနာကျမ်းဆိုတာ ဤနေရာတွင် ပညာနေတ္တိဝိပဿနာကျမ်း၏ မာတိကာမျှကိုသော်မှ ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တော်မူသော မကွေးဆရာတော်ကြီး အားလျှောက်ထားဖူးရာ ဆရာတော်ကြီးက ဤသိုမိန့်ပါသည်။“အဲဒီစာအုပ်ကြီးကို တို့လဲ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ တစ်လုံးမှ နားမလည်ပါဘူး။ ဘာတွေ ရေးထားမှန်းကို မသိဘူး။ တစ်ချက်မှ မှန်တာမပါဘူး”ဟူ ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးက နားမလည်သော စာအုပ်ကြီးသည် မှန်သောစာအုပ်ကြီး ဖြစ်ပါမည်လား...။ အမှားကြီး ဖြစ်ပါမည်လား...။ စဉ်းစား ကြည့်တော် မူကြပါ။ မကွေးဆရာတော်ကြီးသည် အစစ်ဖြစ်သော ထေရ၀ါဒပိဋကသုံးပုံတို့၌ လိမ္မာကျွမ်းကျင် သိမြင်တော် မူပါသည်။လူသေလူဖြစ် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၀ါဒတွေကို အမှားအမှန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ဆောင် ၀ိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်လည်း ဖြစ်တော်မူပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုတီးသမားကြီးဦးညွန့်၏ မဟာယာန၀ါဒ ဖြစ်သော ၀ိပဿနာအမည်ခံ ထေရ၀ါဒအမည်ခံ၊ ဒဿနသမ္ပဒါအမည်ခံ-တရားတို့၏ အနေအထားနှင့်ဦးညွန့်၏ တပည့်ဖြစ်သော ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ၏ ၀ိပဿနာအမည်ခံ၊ ထေရ၀ါဒအမည်ခံ၊ ဒဿနသမ္ပဒါအမည်ခံတရားတို့၏ အခြေအနေတို့ကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် ကြိုက်သလိုသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါလေ။
သမိုင်းအမှန်တွေကို လုံလောက်အောင် တင်ပြပေးမှုသည်သာလျှင် ဝေဖန်ရေးဆရာတုိ့ ဆောင်ရကရမည်ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းအမှားတွေကို ယုံလောက်အောင် တင်ပြပေးမှုသည်ကား လူလိမ်တို့၏ ကိစ္စပါပေ။
ထို့ပြင် (ဆ)ကို ဆက်ကြရအောင်။(ဆ)ကိုပြန်၍ ဖတ်ပါဦး။ ယင်း(ဆ)ဖြင့် ဦးကောသလ္လ’ မရှိတော့လျှင် ဒဿနသမ္ပဒါနည်း ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဟူ၍ပြပါသည်။ သာဓု-သာဓု။ သို့ရာတွင် သာဓုခေါ်ရပါသော်လည်း(ဦးကောသလ္လသည် နောက်ဆုံး ကျည်ဆန်)ဟုဆိုသဖြင့် ကြောက်မိပါသေးသည်။ ကျည်ဆန်ထဲမှာ ပေါက်ကြွဲခင်းသဘော၊ မီးလောင်ကျွမ်း ခြင်းသဘော၊ သက်ရှိတွေကို သေစေနိုင်ခြင်းသဘော၊ ခြေပြတ် လက်ပြတ်ဖြစ်အောင် ပြုနိုင်ခြင်းသဘော၊ သက်မဲ့တွေကို ပျက်စီးစေခြင်း သဘော စသည်များက အပြည့် ရှိနေကြပေသည်။
ဘုရားရှင်၏ သာသနာမှာနေ၍ ဦးညွန့်၏၀ါဒတို့ကို ပျောက်သွားမှာစိုးရိမ် နေသူနှင့် ဘုရားရှင်၏ သာသနာမှာ နေ၍ ဘုရားရှင်၏ ၀ါဒတို့ကို ထိခိုက်ခံရမှာစိုးရိမ်နေသူတို့ မိမိတို့ ရပ်တည်ချက်အတိုင်း မိမိတို့လုပ်ငန်း တွေကို ပြုလုပ် နေကြရ ပါလိမ့်ဦးမည်။
မှာထားချက်။ ။ တစ်ကျော့ပြန် ထေရ၀ါဒအမည်ခံ အဓမ္မ၀ါဒသည် ၁၃၄၁-(၁၉၈၀)ခု မှာ စတင် ၍ မွေးဖွားလာသတည်း။ ၁၃၅၁-(၁၉၉၀)မှာ အရွယ်ရောက်လာပါသည်။ ၁၃၆၆-(၂၀၀၅)မှာ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်၍ ထင်ရှားလာပါသည်။၁၃၆၉-(၂၀၀၈)မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး လွှမ်းမိုးအောင် ကျယ်ပြန့်လာ၍ ပရိသတ်အင်အား အလွန် ကြီးထွားလာပါသည်။ ထိုအခါကျမှ ပရိသတ်အားကိုးဖြင့် ပို၍ ပေါ်တင်ကျလာပါသည်။ ၁၃၇၁-(၂၀၁၀)လောက်ကျရင်တော့ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးတို့က “ငါတို့က အစစ်ဖြစ်သောထေရ၀ါဒ-ဗုဒ္ဓ၀ါဒတို့ကို လိုက်နာသူများ ပေတည်း။ သူတို့ကတော့ အတုဖြစ်သောထေရ၀ါဒ-ဦးညွန့်ဝါဒ- ဦးမြင့်သိန်းဝါဒ- တို့ကို လိုက်နာသူများပေတည်း” ဟူ၍ ကွဲပြားကာ ခြားနားလာပြီး-“သြော် အစစ်ဖြစ်သော ထေရ၀ါဒ-ဗုဒ္ဓ၀ါဒါ တို့ကို နာမည်ယူသုံးပြီး အတုဖြစ်သော ထေရ၀ါဒ-ဦးညွန့်ဝါဒတို့ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာအောင် ငါတို့ကို မလိမ့်တစ်ပတ်-လှိမ့်-အပတ်ပတ် တို့ဖြင့် ချာချာလည်အောင် သူတို့ကလှည့်ထားလျက် စားနေကြတာပါကလား”ဟူ၍ သိမြင် လာကြ ပေတော့မည်။ ထိုအခါမှာတော့ မည်သို့ရှိပါတော့အံ့နည်း။ (မသိနိုင်သေးပါ။)
“ဤဒဿနသမ္ပဒါနည်းသည် လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ကွယ်ပျောက် သွားပါလိမ့်မယ်”ဟူသော အဆိုသည် (ဆိုသည့်အတိုင်း) မှန်ကန်ပါစေသတည်း ဟူ၍သာလျှင်...။
ထို့ပြင်(ဇ)ကို ဆက်ကြည့်ရအောင်။ (ဇ)မှာ ဓမ္မစေတီက-”ကြားဖူးထားသောဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာနည်းတွေ၊ဗုဒ္ဓ ဟောသည့်အတိုင်း လိုက်နေကြသော မဟာစည်ဝိပဿနာနည်းတွေ၊ ဗုဒ္ဓဟောသည့်အတိုင်း လိုက်နေကြသော မိုးကုတ် ၀ိပဿနာနည်းတွေ...နည်းတွေ...နည်းတွေ။ အဲဒါတွေအားလုံးကို ဖယ်ပစ်လိုက်ကြ- ပယ်ပစ်ကြ” ဟူ၍ အမိန့်ပေး ထားပါသည်။
ဤအမိန့်ကို အဘယ်ကြောင့် ပေးရသနည်း။ အခုထေရ၀ါဒ ဒဿနသမ္ပဒါနည်းကို ဟောပြတော့မှာ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ (၀ါ) ထေရ၀ါဒ ဒဿနသမ္ပဒါနည်းသည် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောသော တရားနည်း မဟုတ်သောကြောင့်တည်း။
ဤ(ဇ)အမှတ်ပြတွင်ကောက်ယူပြထားသည့် ဥက္ကံသဗုဒ္ဓိ-သြ၀ါဒတော်သည် “အစစ်ဖြစ်သော ထေရ၀ါဒီဘုန်းကြီး ရဟန်း သံဃာတော်တို့သည် နွားသူခိုးတို့ ပေတည်း”ဟူ၍ စွပ်စွဲထားသည့်ရန်စ စကားကြီးသာ ဖြစ်နေပါသည်။
ဤသို့သောစကားဖြင့် သံဃာတို့ကိုစွပ်စွဲသူသည် ဘယ်လို သတ္တ၀ါ ဖြစ်သနည်းဟူ၍ ဆင်ခြင်ကြည့် လိုက်သောအခါ- ”သူများကိစ္စထဲ ၀င်မရှုပ်နဲ့။ သီလရှင် ကျေနပ်ရင် ဇရပ်ပဲ ကျိုးကျိုး-ဗန်းပဲ ပျောက်ပျောက်” ဟူ၍ အယူဝါဒရှိသူ ဖြစ်သတည်း။
“ဇရပ်ကျိုးကျိုး ဗန်းပဲပျောက်ပျောက်”ဟူ၍ အယူဝါဒရှိသူ ဥက္ကံသဗုဒ္ဓိသည် သံဃာတော်တို့ကို စွပ်စွဲရုံမျှဖြင့် အားမရသေးခြင်းကြောင့် လူတို့ကိုလည်း ဤသို့ စွပ်စွဲလိုက်ပါသေးသည်။ “ဒီနေ့ ၀ိပဿနာ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 1:14 AM2comments:
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 12:42 AM | မစိုးရိမ်စာသင်သား | အဓမ္မ၀ါဒဓမ္မစေတီ Be the first to comment!
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဓမ္မစေတီဟောထားခဲ့ရာ ဒဿန သမ္ပဒါ(၈)ချပ် တို့ထဲက ခွေအမှတ်(၄) ထဲတွင်-
(၁)ရှင်မဟာကဿပကြီးက သိကြားမင်းအား တောက်ခေါက်ကြောင်း၊ ရဟန္တာတုိ့သည် စိတ်တိုတတ် ကြကြောင်း၊ ရဟန္တာတို့မှာ မနော ဒုစရိုက် ဖြစ်သေးကြောင်း။
(၂) မဟာပန်ရဟန္တာကြီးက ညီစူဠပန်ကို နှင်ထုတ်ကြောင်း၊ စူဠပန်သည် ရဟန္တာဖြစ်မည်ဆိုတာကို မသိကြောင်း၊ ရဟန္တာတို့သည် အကုန်သိသူများ မဟုတ်ကြောင်း။
(၃) အရှင်သာရိပုတြာက ရေမြောင်းကို ခုန်၍ကူးကြောင်း၊ ၀ါသနာကို ရဟန္တာတို့ကတောင်မှ မစွန့်နိုင်ကြောင်း။
(၄) ဥရုဝေလကဿပညီနောင်တသည် မီးကိုလုပ်ကျွေး၍ ပူဇော်သူများဖြစ်ခြင်းကြောင့် သူတို့အတွက် မီးတရားကို မြတ်စွာဘုရား ဟောကြောင်း၊ မီးတရားဖြင့် အတိတဓမ္မာရုံ(ဥပဒါနက္ခန္ဓာ)ကို ဖော်ပြ ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အတိတ်ဓမ္မာရုံ (ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ)၌ ဖြစ်ပျက်မြင်ပြီး ကဿပညီနောင်တို့ ရဟန္တာ ဖြစ်ကြကြောင်း။
(၅) ရှင်စူဠပန်သည် ပန်းထိမ်သည်ဖြစ်ဖူးခြင်းကြောင့် ရှင်စူဠပန်အတွက် ပ၀ါကလေးကိုပေး၍ အတိတ်ဓမ္မာရုံ (ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ)ကို ဖော်ပြပေးကြောင်း၊ ရှင်စူဠပန်က ဖြစ်ပျက်ကို ဖတ်ခနဲ မြင်သွားပြီး ရဟန္တာ ဖြစ်သွားကြောင်း၊ မဟာပန်ကို မခံချင်စိတ်ဖြစ်၍ ရှင်စူဠပန်က(မနောဒုစရိက်ဖြင့်) တန်ခိုးဖန်ဆင်းပြကြောင်း-တုိ့ကို ဟောပြပြီး -
(က) အတိတ်ဓမ္မာရုံ (ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ= တကယ် ဖြစ်တည်ပျက်ရှိ ပရမတ်တရား မဟုတ်သော အတွေးပုံရိပ်= ပညတ်တရား)သည် ဒုက္ခသစ္စာ။
(ခ) အဲဒါကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ တဏှာသည် သမုဒယသစ္စာ။
(ဂ)အဲဒီတရားနှစ်မျိုး ချုပ်ငြိမ်းသွားတာက နိရောဓသစ္စာ။
(ဃ) အတိတ်ဓမ္မာရုံ=ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ၏ ပြောင်းလဲသွားပုံကို ဖြစ်ပျက် မြင်လိုက်တော့ လေးမဂ် (မဂ္ဂသစ္စာ) လေးဖိုလ် ကျပြီး ရှင်စူဠပန် ရဟန္တာဖြစ်သွားကြောင်း”တို့ကို ဟောထားသည်။
အထက်ပါကောက်နုတ်ချက် (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅)တို့သည် အမှတ်(၄)ခွေ တစ်ခွေလုံး၏ အကျဉ်းချုပ်မျှသာ ဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုတွင် အမှတ်(၁)၌- ရဟန္တာတို့မှာမနောဒုစရိုက်မဖြစ်ကြပါ။ ဓမ္မစေတီက သင်္ဂီတသတအဋ္ဌကထာကို အကိုးအကားပြု၍ ရဟန္တာတို့မှာ မနောဒုစရိုက်ဖြစ်ကြောင်း တို့ကို အခြားခွေများမှာ အာပေါင်အာရင်း သန်သန်ဖြင့် ဟောလေ့ရှိပါသည်။ ရဟန္တာတို့မှာ မနောဒုစရိုက်မရှိပါ။ အဘိဇ္ဈာ= သူတစ်ပါး၏ပစ္စည်းကို လောဘ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မတရား နည်းဖြင့် (သူတစ်ပါးကဲ့သို့ ထိုဥစ္စာကို ရရှိအောင် ကြိုးစားရှာဖွေ စုဆောင်းသော နည်းကို မလုပ်ဆောင်ဘဲ) အချောင်ရအောင် ကောက်ကျစ် လိမ်ညာ လှည့်ပတ်၍ ရယူသိမ်းပိုက်ခြင်း သဘောရှိသော လောဘတရား၊ ဗျာပါဒ=သူတစ်ပါးတို့ကို အသက်ခန္ဓာ ဥစ္စာပစ္စည်း ပျက်စီးအောင် ဖျက်ဆီးခြင်း သဘောရှိသော ဒေါသတရား၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ=အတ္တကောင်ရ၏ဟု ယူခြင်းသဘောရှိသော သက္ကာယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ အတ္တကောင်- ၀ိညာဉ်ကောင် ဖြစ်သော လောက၏ အဆုံးသည်ရှိ၏-မရှိ- စသည်ဖြင့် ယူခြင်းသဘောရှိသော အန္တဂ္ဂါဟိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ အလှူ၏အကျိုးသည် မရှိ-စသည်ဖြင့်ယူခြင်းသဘောရှိသော ဒသ၀တ္ထုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ သတ္တ၀ါကောင်ဟု ယူခြင်းသဘောရှိသော ဣဿရနိမ္မာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ စသည်တို့ပင် ဖြစ်ကြပါသည်။
မနောဒုစရိုက်-အမည်ရရှိကြကုန်သော လောဘ၊ ဒေါသ၊ ဒိဋ္ဌိတို့သည်
(၁) ၀ီတိက္ကမအဆင့်အားဖြင့် ဖြစ်ကြသည်။
(၂) ပရိယုဋ္ဌာနအားဖြင့် ဖြစ်ကြသည်။
(၃) အနုသယအဆင့်အားဖြင့် (မဖြစ်သော်လည်း အကြောင်းညီညွတ်လျှင် ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်) ရှိကြသည်။
(၄) ၀ါသနာ အဆင့်အားဖြင့် ရှိကြသည်ဟူ၍ အဆင့်ဆင့် ခြားနားကြပါသည်။
ဤ(၄)ဆင့်တို့တွင်- ၀ါသနာအလျောက်ရှိခြင်းကို ရှိသည်ဟု မဆိုအပ်ပေ။ ဖြစ်သည်ဟု မဆိုအပ်ပေ။ အနုသယ အဆင့်အားဖြင့် ရှိခြင်းကို ရှိသည်ဟုသာ ဆိုရပါသည်။ ဖြစ်သည်ဟု မဆိုရပါ။
ပရိယုဋ္ဌာနအဆင်၊့ ၀ီတက္ကမ အဆင်ြ့ဖစ်ခြင်းကိုသာလျှင် ဖြစ်သည်ဟု လည်း ဆိုရပါသည်။ ရှိသည်ဟုလည်း ဆိုရပါသည်။ ဤသို့အဆင်ဆင့် ကြွဲပားခြားနားလျက် ရြှိကရာတွင် ရဟန္တာတို့သည် အရဟတ္တမဂ်ဥာဏ်ဖြင့် ၀ီတိက္ကမအဆင်၊့ ပရိယဋ္ဌာနအဆင်၊့ အနုသယအဆင့် မနောဒုစရိုက် (လောဘ၊ဒေါသ၊ဒိဋ္ဌိ)တို့ကို လုံးဝ အမြစ်ပြတ် ပယ်စွန့်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ရဟန္တာဟူ၍ ဖြစ်လာကြပါသည်။
၀ါသနာအဆင့် မနောဒုစရိုက် (လောဘ၊ဒေါသ၊ဒိဌိ )တို့၏ ရှိခြင်း ဆိုသည်မှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော အနာကြီး၏ အမာရွတ်ကျန်နေသကဲ့သို့ အနာမရှိသော်လည်း၊ အနာဖြစ် နေသည် မဟုတ်သော်လည်း စွဲထင်နေခြင်းသဘော သက်သက်မျှသာဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ၀ါသနာအဆင့် မနောဒုစရိုက်- ရှိနေခြင်းကို မနောဒုစရိုက် ရှိသည်ဟု မဆိုရပါ။ မနောဒုစရိုက် ဖြစ်သေးသည် ဟုလည်း မဆိုရပါ။ ယင်းသို့ ရဟန္တာတို့မှာ မနောဒုစရိုက် ဖြစ်သေးသည်ဟု ဆိုလျှင် ထိုသို့ဆိုသူသည် အနုသယယမက၊ ပဇဟန၀ါရ၊ ပဟီန၀ါရတို့ကို ဖျက်ဆီးသူမည်ပါသည်။ သမုဒယသစ္စာ ပယ်အပ်ပုံကိုပြဆိုသည့် ဓမ္မစကြာ၊ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စသည် တို့ကိုလည်း ဖျက်ဆီးသူ မည်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် “ဒုစရိုက် ၁၀-တို့၌ တည်သော အကုသိုလ်စိတ်သည် မဂ်ဖိုလ်တရားတို့ကို ရရှိအောင် မပြုနိုင်ကြောင်း၊ ဒုစရိုက် ၁၀-ပါးစလုံး ကင်းရှင်း ပြီး သုစရိုက် ၁၀-ပါးတု၌ တည်နေသော ကုသလစိတ် (ဘာဝနာစိတ်)က သာလျှင် မဂ်ဖိုလ်တရားတို့ကို ရရှိအောင် ပြုနိုင်ကြောင်း” ဟောပြထားရာ
ခုဒ္ဒကပါဠိတော် ဓမ္မပဒလာ (န တံ မာတာပိတာ ကယိရာ၊ အညေ၀ါပိစဥာတကာ။ သမ္မာပဏိဟိတံစိတ္တံ၊ သေယျသောနံတတောကရေ) နှင့် ခုဒ္ဒကပါဠိတော် - သုတ္တနိပါတလာ(အသေ၀နာစ ဗာလာနံ၊ ပဏ္ဍိတာနဉ္စ သေ၀နာ။ ပူဇာစပူဇနေယျာနံ၊ ဧတံမင်္ဂလမုတ္တမံ)တို့ကို ဖျက်ဆီးသူ မည်ပါသည်။
ဓမ္မစေတီသည် ဤသို့သော ပါဠိတော်များကို မျက်ကွယ်ပြု၍ (၀ါ) သူယူစွဲထားသော အဓမ္မ၀ါဒနှင့် လုံးဝညှိမရသော ဒေသနာတို့ကို စော်ကား ပယ်ချ၍ တစ်ဖတ်သတ် ဟောလေ့ရှိသူသာ ဖြစ်ပါသည်။ သူစွဲယူနေသော အဓမ္မ၀ါဒနှင့် ညီညွတ်နိုင်ရာ ဒေသနာတို့ကို တွေ့ရှိပါမူကား ကျမ်းသိမခက် ကျမ်းညှိခက်-စသည်ဖြင့် လုပ်ယူလေ့ရှိပါသည်။ (လုပ်ယူ=...)
ဤအမှတ်(၁)ကောက်စာမှာ ဓမ္မစေတီဟောသည့်အတိုင်း အရှင်မဟာကဿပက တောက်ခေါက်သည် မဟုတ်ပါ။ သူဆင်းရဲတို့အား ချီးမြောက်လိုရာတွင် သူဆင်းရဲတို့က ရရှိထိုက်သော အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သိကြားမင်းက လိုချင်နေသည့်အတွက် သိကြားမင်းကို တားမြစ်၍ ဆုံးမခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်တိုခြင်းကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါ။ (မိဘဆရာတို့သည် သားသမီးတပည့်တို့ကို စိတ်မတိုဘဲ= ဒေါသမဖြစ်ဘဲ ငေါက်ငမ်း၍ တားမြစ်လေ့ ရှိကြပါသည်။ ဆုံးမလေ့ရှိကြပါသည်။)
“ဟဲ့သူအို ၊ နင်က သိကြားမင်း ပဲ” ဟူ သည် တို့ကို မိန့်ဟ ၍တားမြစ်မှုကို မနောဒုစရိုက် (ဒေါသ)ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဟုယူလျှင် ထိုသို့ ယူသူ၏ ဓမ္မရေးရာ နားမလည်ပုံနှင့် လောကရေးရာ မိုက်မဲပုံသာတည်း။
အထူးသတိ ပြုရန်မှာ ။ ။
ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ကို ဂုဏ်သိက္ခာ ပျက်ပြားအောင် စေတနာပါပါဖြင့် ပြောဆို၍ ပြစ်မှားသူသည် အရိယူပ၀ါဒ- အန္တရာယ်ထိုက်သူ ဖြစ်၏။
ထို့ပြင် အမှတ်(၂)ကောက်စာမှာလည်း မဟာပန်ရဟန္တာကြီးက မနောဒုစရိုက်(ဒေါသ) ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရှင်စူဠပန်ကို နှင်ထုတ်သည်ဟု ဆိုလို ပါသည်။ (ရှင်းပြစရာ မလိုပါပြီ။) ရဟန္တာတို့မှာ သဗ္ဗညုတဥာဏ်-မရြှိခင်းကြောင့် ရဟန္တာတိုက အကုန်လုံးကို မသိနိုင်ကြပါပေ။
ထုိ့ပြင် အမှတ်(၃)ကောက်စာမှာ ၀ါသနာအဆင့် မနောဒုစရိုက်(လောဘ၊ ဒိဋ္ဌိ၊ ဒေါသ)တို့သည်ရဟန္တာတို့မှာ ရှိနေတတ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို အမှတ်(၁)ကောက်စာကို ရှင်းပြရာတွင် တင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ သို့ရာတွင် ရှင်သာရိပုတြာက ရေမြောင်းကိုခုန်၍ ကူးကြောင်း သည် ပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာ ဘယ်မှာမျှ မရှိပါ။
(ပြစ်မှားလို၍ ပြောလျှင် ပြောသူမှာ အပြစ်ရှိသည်။ ၀ါသနာ မပယ်စွန့်ကြောင်း ပြောလိုလျှင် ရှိသည့်အတိုင်းသာ ပြောသင့်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အရှင်ပိလိန္ဒ၀စ္ဆ အကြောင်းမျိုးကိုသာ ပြောသင့်ပါသည်။ ၀ါသနာအဆင်မျှ ကျန်ရှိနေခြင်းသည် မဂ်ဖြင့် ပယ်လောက်သော ပမာဏအထိ မရှိခြင်းကြောင့် ရှိစာရင်းတွင်မျှ မ၀င်ပါ။ ဖြစ်စာရင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ဆိုလျှင်ကား ဝေးပါ၏။)
(၁) မြတ်စွာဘုရားတို့သည် ကိလေသာတို့ကို ၀ါသနာမျှ မကျန်ရအောင် ပယ်စွန့်ကုန်၏။ (၂) ရဟန္တာတို့သည် ကိလေသာတို့ကို အမြစ်ပြတ် ပယ်စွန့်နိုင်ကြသော်လည်း ၀ါသနာကြွင်းကျန်ပါသည်။ ထို့ပြင် အမှတ်(၄) ကောက်စာ၌ မီးတရား ဟောပြပေးကြောင်းသည် မှန်ပါသည်။ သို့သော် မီးတရားဖြင့် အတိတ်ဓမ္မာရုံကို (၀ါ)ဥပါဒါနက္ခန္ဓာကို ဖော်ပြပေးသည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ အမှားသာတည်း။ အတိတ်ဓမ္မာရုံ ဟူသည် ပညတ်တည်း။
ဓမ္မစေတီတို့သည် “ဤအတိတ် ဓမ္မာရုံ ( ၀ါ)ပညတ် ဓမ္မာရုံ ( ၀ါ)မိ စ္ဆာဓမ္မာရုံသည် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာမည်၏” ဟုဆို၍ “အတိတ်ဓမ္မာရုံသည် ၀ိပဿနာရှုအပ်သော အကြောင်းခန္ဓာဖြစ်သည်” ဟုလည်း ဆိုကြပါသည်။ သို့သော်“အဆိုပါ အတိတ်ဓမ္မာရံ (၀ါ) ပညတ်ဓမ္မာရံ (၀ါ) မိစာဓမ္မာရံ(၀ါ) ဥပါဒါနက္ခနာတု၌ ရှုမြင်နေလျှင် တရားမရ” ဟုလည်း ဆိုကြပါသည်။
“ဓမ္မစေတီ”-အမည်ရှိခွေထဲတွင် ပုဒ်ရေ ၂၄-အတွင်း ၁၀-မိနစ် အရောက်မှာ ဓမ္မစေတီကိုယ်တိုင် ဤသို့ ဟောထားပါသည်။
“ဦးဇင်း=(-ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိ)-ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေကို နောက်ကြောင်းပြန်ရင် မိစ္ဆာဓမ္မာရုံ ဖြစ်တတ်တယ်နော်လို့ သူ့ဆရာ (=ဥက္ကံသဗုဒ္ဓိရဲ့ဆရာ ဦးမြင့်သိန်း)က ဆုံးမတယ်“ ဟူသတည်း။
ဆိုလိုရင်းကား “အတိတ်ဓမ္မာရုံကို ရှုနေလျှင် တရားမရနိုင်။ အတိတ်ဓမ္မာရုံကို မဖော်ရ” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ကောက်ပြထားသော ကောက်စာအမှတ်(၄) (၅)တိုနှင့် သေသေချာချာ တိုက်ဆိုင်ကြည့်ကြပါ။ ကောက်စာ(၄)တွင် အတိတ်ဓမ္မာရုံ(၀ါ) ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ (ပညတ်)၌ ဖြစ်ပျက်မြင်ပြီးဟုဆိုရာတွင် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ (လောကီတရားစု= ပရမတ္ထခန္ဓာ)၌ ၀ိပဿနဥာဏ်ဖြင့် ဖြစ်ပျက်(အနိစ္စလက္ခဏာ) မြင်ပြီးဟုပြင်၍ ဆိုမှသာလျှင် မှန်သောတရား ဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မစေတီဆရာစဉ်ဆက်တို့က ယူကြသည်မှာ- “ဥပါဒါနက္ခန္ဓာအရ ဖြစ်ကြကုန်သော လောကီစိတ် ၈၁-ပါး၊ လောကီစေတသိက် -၅၂-ပါး၊ ရုပ်-၂၈-ပါး တရားစုတို့သည် ပရမတ်ဓမ္မာရုံမည်၏။ ယင်းပရမတ္ထတရားတို့သည် တကယ်ဖြစ်၍ တကယ်ရှိနေ ကြပါသော်လည်း ယင်းတို့ကို သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကြီး တို့၏ ဥာဏ်ဖြင့် အာရုံပြုနိုင်သည်။ ရှုမှတ်သိမြင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းပရမတ် တို့ကို သာဝကတို့က ရှုမှတ်သိမြင်နိုင်ကြသည်ဟုဆိုလျှင် ထိုအဆိုသည် အမှားသာတည်း” ဟူ၍ ယူဆကြပါသည်။
ထိုကြောင့် ဓမ္မစေတီ ဆရာစဉ်ဆက်တိုက ယူကြသည်မှာ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာအရ အဆိုပါ ပရမတ်တရားစုတို့ကို မယူရ။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာအရ မိစ္ဆာဓမ္မာရုံ(၀ါ) ပညတ်ဓမ္မာရုံ(၀ါ) အတွေးပုံရိပ(၀ါ) သဏ္ဌာနပညတ်တို့ကိုသာ ယူရမည်” ဟူ၍ ယူဆကြပါသည်။ ဤသို့ ယူဆကြကာ (က) အဆိုပါဥပါဒါန က္ခန္ဓာ=ပညတ်ဓမ္မာရုံတို့၌ ၀ိပဿနာရှုမြင်မှ တရားရသည်။
(ခ) အဆိုပါ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ=ပညတ်ဓမ္မာရုံတို့၌ ၀ိပဿနာ မရှူရ။ ရှုလျှင် တရားမရနိုင်ဟူ၍ ရှေ့နောက်မညီ ယူကြပါသည်။ (မိစ္ဆာဓမ္မာရုံ ဖြစ်တတ်တယ်-နော်..လို့။) မှန်လှ၏။ ပရမတ်ဓမ္မာရုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဆူးလေ ဦးမြင့်သိန်းက သူရေးသားသော အကုပ္ပါမေ၀ိမုတ္တိ- ဗုဒ္ဓ၀ိညာဏ်တော်စာအုပ် သဘာဝနိဒါန်း စာမျက်နှာ(ဋ)၌ ဤသို့ ရေးထားပါသည်။ ပဉ္စက္ခန္ဓေ၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာတရား ငါးပါးတို့ကို။ အသာရတော၊ အနှစ်အသား မရှိသောအားဖြင့်။ ပဿန္တော၊ ရှုမြင်ခဲ့သည် ရှိသော်။ အနုလောမိက၊ံ မဂ်ဥာဏ်နှင့်လျော်သော။ ခနိံ၊္တသမ္မာဒိဋ္ဌိ ဥာဏ်အမြင်မှန်ကို။ ပဋိလဘတိ၊ ရ၏။ ဤကား နေယျတ္ထနည်းအားဖြင့် ဟောတော်မူသော ဒေသနာတော်ဖြစ်သည်။
ဤ “ပဉ္စကန္ဓေ”ဟူသောပုဒ်၌ ပရမတ္ထခန္ဓာကို ကောက်ယူခဲ့လျှင် မသင့်။ (ပညတ်ခန္ဓာကိုယူမှ သင့်သည်။) အဘယ်ကြောင့် မသင့်သနည်းဟူမူ ပရမတ္ထခန္ဓာကို ဋီကာဆရာက “ဗုဒ္ဓါ နံယေ၀ ၀ိသယော၊ သာဝကာနံ န ၀ိသယော” ဤကဲသို့ ဖွင်ဆိုထားသောကြောင့် ပရမတ္ထခန္ဓာသည် သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်တို့၏ အာရုံသာ ဖြစ်၏။ သာဝကတို့၏ အာရုံ-ကျက်စားရာ မဟုတ်ဘူး-တဲ့။
“ထိုစကားမှန်၏။ ပရမတ္ထခန္ဓာသည် ဓာတ်ကြီးလေးပါးနှင့်တကွ အထည် ဒြပ် ဥပါဒ် ဌီ ဘင် ဟူသော ခဏငယ်သုံးချက်ရှိ သောခန္ဓာ ဖြစ်၏။ ပဉ္စုပါဒါနက္ခန္ဓာသည် ခဏငယ်သုံးချက်နှင့်တကွ ဓာတ်ကြီး လေးပါးတည်းဟူသော အထည်ဒြပ်-မရှိ။ သုညခန္ဓာ ဖြစ်၏။ (ပညတ်ခန္ဓာဖြစ်၏။)ဟူ၍ ရေးသားထားပါသည်။
မှာထားချက်။ ။ “ပဉ္စက္ခန္ဓေ(ပ)ပဋိလဘတိ-ရ၏”သည် ပဉ္စက္ခန္ဓေ ပုဒ်အရ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ (ပရမတ်တရားစု)ကို ယူဟုပြရာ တစ်ချက်မျှသာ ဥပစာသဒ္ဒါ-နေယျတ္ထနည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပဉ္စက္ခန္ဓာဟု သာမညအားဖြင့် ရှိသော်လည်း လောကုတ္တရာ ခန္ဓာတို့ကိုမယူရ- ဟု ဆိုခြင်းကြောင့် နေယျတ္ထ ဖြစ်ပါသည်။ အသာရတောကို ထောက်၍ ၀ိပဿနာရှုအပ်သော ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ=ပရမတ္ထကယပါ။ ဒေသနာ တစ်ခုလုံးသည်ကား နီတတ္ထသာတည်း။ မုချတ္ထသာတည်း။ နေယျတ္ထမဟုတ်ပါ။
ပဉ္စက္ခန္ဓေအရ ပရမတ္ထခန္ဓာကို ကောက်ယူမှသာလျှင် သင့်ပါသည်။ မှန်ပါသည်။ ပညတ်ခန္ဓာဟူ၍ပင် မရှိကောင်းသောကြောင့် ပညတ်ကို ကောက်ယူလျှင် လုံးဝအမှားတည်း။ ပညတ်သည် ခန္ဓာမည်၏ဟူ၍ ဘယ်မှာမှ မရှိပါ။ ပိဋကသုံးပုံမှာရှိလျှင် ထုတ်ပြစမ်းပါ။
ဋီကာဆရာက “ဗုဒ္ဓါနံယေ၀ ၀ိသယော” ဟုဆိုခြင်းသည် ဗုဒ္ဓတို့ကသာလျှင် ထုတ်ဖော်၍ ဒေသနာဥာဏ်ဖြင့် နာမည်တပ်၍ ဟောပြနိုင်သော တရားဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓတို့က ဟောမပြလျှင် သာဝကတို့က မဖော်ထုတ်နိုင်။ ဒေသနာဥာဏ်ဖြင့် နာမည်တပ်၍ မဟောနိုင်ဟူ၍ ဆိုလိုပါသည်။
သာဓကမှာ “ပရိဝါပါဠိတော်၌ မြတ်ဗုဒ္ဓမပွင့်လျှင် ပရမတ္ထတရား တို့၏ ရုပ်၊ နာမ်၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာ အစရှိသော နာမည်မျှကသော်လည်း မသိနိုင်” ဟူ၍ ရှိပါသည်။ ဆူးလေဦးမြင့်သိန်း ၊ ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိ ၊ ဦးနာရဒ၊ ဦးကောသလ္လ’ စသူတို့၏ ” ပဉ္စက္ခန္ဓာ၌ ဥပါဒ် ဌီ ဘင် ခဏသုံးပါးရှိ၏။ ပဉ္စုပါဒါနက္ခန္ဓာ ၌ ခဏငယ် သုံးပါးမရှိ”- ဟူသော စကားသည် ပါဠိတော် အဋ္ဌကထာ ဋီကာ ဘယ်မှာမျှ မရှိသော (၀ါ) ဘုရားမဟောသော မတရား သာတည်း။
အဓိပ္ပာယ်မှန်မှာ ပရိဝါအတိုင်း မြတ်ဗုဒ္ဓတို့က ပရမတ္ထတို့ကို (အဓိပ္ပာယ်ရော အမည်တို့ကိုပါ) အသေးစိတ်ဟောပြ၍ ထိုဟောပြတော် မူသော နည်းအတိုင်း သာဝကတို့က သိမြင်ကြပြီး ၀ိပဿနာ ရှုမြင်ကြမှသာ လျှင် မဂ်ဖိုလ်ရကြပါသည်။
ဆူးလေဦးမြင့်သိန်း ...ဓမ္မစေတီ ဦးကောသလ္လ’ စ သူ တို့သည် အထက်ပါအတိုင်း ပရမတ္ထကို ပယ်မြစ်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ သို့သော်သူတုိ့ဟောထားရာ တရားတို့ကို ကြည့်ပါက ပရမတ္ထတရားတို့ကို ရှင်းပြသော ဒေသနာများချည်း ဖြစ်ကြပါသည်။
၂။ မဂ္ဂင်လမ်း ၇-သွယ်။
၇။ ၀ိညာဏ်သုးံ ပါး။
၁၁။ ဒဿနသမ္ပဒါနှင့် ဘာဝနာသမ္ပဒါ။
၁၄။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာနှင့်အနုပါဒါနက္ခန္ဓာတို့၏ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်
၁၈။ သတ္တာဝါသဘုံကိုးဝနှင့် ၀ိညာဏဌိတိ(၇)ပါး။ နိဗ္ဗာန်ဂုဏ်တော်အဖွင့်။ ပစ္ဆိမဗုဒ္ဓဒေသနာတော်=
(အရှည်တွင်သံသရာ အချည်ကတော့ တဏှာ (ပ) ပြည့်စုံရစ်ကြပါလော့။)
ဤမာတိကာတို့သည် ဆူးလေဦးမြင့်သိန်း၏ အရိယသစ္စာလမ်းစဉ် ၀ိပဿနာတရားမှတ်ချက် ပေါင်းချုပ် စာအုပ်ကြီးထဲက မာတိကာဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မစေတီ၏ တရားအမည်များကို အထူးဖော်ပြဖွယ်မလို။ အယူဝါဒ (မနောကံ)နှင့် အဟောအရေး (၀စီက၊ံ ကာယကံ)တို့ အချင်ချင်း ဆန်ကျင်သူများပေတည်း။ ဤသို့ ကံသုံးချက် မညီသူတို့ကိုမြတ်ဗုဒ္ဓက “ကောက်ကျစ်သူ” ဟု သတ်မှတ်တော်မူပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 12:42 AM No comments:
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 12:35 AM | မစိုးရိမ်စာသင်သား | အဓမ္မ၀ါဒဓမ္မစေတီ 1 Comment so far
သြစတြေးလျား နိုင်ငံတွင် ဟောကြားခဲ့သော ဒဿနသမ္ပဒါ(၈)ချပ်ထဲတွင် ဤသို့ ဟောကြားထားပါသည်..........
“ဥိးကောသလ္လက ပိဋကတ်စာပေတွေကို မသင်ခင်မှာပဲ ဆရာတော်ကြီး(ဆူးလေဥိးမြင့်သိန်း၏ တပည့်ကြိးဖြစ်သူ ဥိးဥက္ကသံဗုဒ္ဓိ) က“ဒီထေရ၀ါဒတရားတွေ၊ ဒီဝိပဿနာ တရားတွေ” ကို ၂ နှစ်လောက်အထိ သင်ပေးတာ။ ဒါကြောင့် ဥိးကောသလ္လ က ၀ိပဿနာတရားတည်သူ- ဖြစ်နေတော့ မန္တလေးသွားပြီး စာသင်တာ -၃-လ နဲ့ စာတတ်လာပါတယ်။ ပိဋကတ်တွေကို မမေ့တော့ဘူး။ “ဆရာကြိးရဲ့သင်တန်းမှာ“ဘုန်းကြီးတွေ သီလရှင်တွေက ညညဆိုရင် ကလေးမွေးတယ်လို့ မိန့်တယ်။ အဲဒါကို မသိဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့။ အဲဒီဟာကို ၀ိပဿနာ သင်တန်း လာတက်ကြတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို မေးရတယ်။ နောက်တော့ ပိဋကတ်တော်တွေကို သိလာတော့ “ရာဂပုတ္တံ ၀ိဇာယတိ- စက္ခု နဲ့ ရူပါရုံ ဆုံမိတော့ စွဲလမ်းပြီး ရာဂဆိုတဲ့ သားကို မွေးတာပဲ” လို့ အဖြေရလာတယ်။
အထက်ပါ ဟောပြောချက်တွင် ဓမ္မစေတီ ဦးကောသလ္လသည် ဥိးဥက္ကသံဗုဒ္ဓိ၏ တပည့် ဦးဥက္ကသံဗုဒ္ဓိ သည် ဆူးလေဦးမြင့်သိန်း၏ တပည့်ဆူးလေ ဥိမြင့်သိန်းသည် အဓမ္မ၀ါဒီ ဦးဥက္ကသံဗုဒ္ဓိ သည် အဓမ္မ၀ါဒီ ဦးဥက္ကသံဗုဒ္ဓိ သင်တန်းပေးရာ ထေရ၀ါဒ အမည်ခံ သင်တန်းစာများနှင့် ၀ိပဿနာတရား အမည်ခံ သင်ခန်းစာများသည် အဓမ္မ၀ါဒ၊ ထို့ကြောင့် ဦးကောသလ္လသည် အဓမ္မ၀ါဒီ၊ ဦးကောသလ္လ ဟောနေသော ထေရ၀ါဒ အမည်ခံတရားများနှင့် ၀ိပဿနာတရားများသည် အဓမ္မ၀ါဒ၊ သို့ဖြစ်၍ ဦးကောသလ္လသည် အစစ်အမှန်ဖြစ်သော ၀ိပဿနာတည်သူမဟုတ်။ အတုအယောင်ဖြစ်သော ၀ိပဿနာတည်သူ ဖြစ်၏။ ဦးဥက္ကသံဗုဒ္ဓိ၊ ဥိးကောသလ္လ အစရှိကုန်သော ထေရ၀ါဒ အမည်ခံ ဘုန်းကြီးတို့သည် ရာဂသားမွေးတတ်သူ တဏှာတမားများ ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓသာဝက အစစ် ထေရ၀ါဒီအစစ်ဖြစ်ကုန်သော ဘုန်းကြီးများတွင် ညညမှာ ရာဂသားမွေးတတ် သူများလည်း ရှိကြပေလိမ့်မည်။ ဘာဝနာ တရားပွားများသူလည်း ရှိကြပါလိမ့်မည်။
((((((မန္တလေးသွားပြီး စာသင်တာ -၃-လ နဲ့ စာတတ်လာပါတယ်။ ပိဋကတ်တွေကို မမေ့တော့ဘူး။))))))သုံးလနှင့် ပိဋပတ်တော်တွေ တတ်သွားတာတော့ တော်တော် အံ့သြစရာကောင်းပါသည်။ တိပိဋကတ် စာမေးပွဲ ဘာကြောင့် ၀င်မဖြေသလဲ မသိဘူး။ စာရှူသူ့တို့ပဲ မေးကြည့်လိုက်ကြနော် .........
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 12:35 AM 1 comment:
ဓမ္မစေတီ ဥိးကောသလ္လ၏ ဆရာများ--အပိုင်း(၁)
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 12:08 AM | မစိုးရိမ်စာသင်သား | အဓမ္မ၀ါဒဓမ္မစေတီ Be the first to comment!
အထက်ပါ အချက်လက်များသည် ဓမ္မစေတီဥိးကောသလ္လ၏http://www.dhammaceti.org/home.htm မှ
အချက်လက်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ စာရှူသူများ သိသာအောင် ဖော်ပြပေးပါမည်။
ဦးဥက္ကသဗုဒ္ဓိ သည် ဆူးလေ ဦးမြင့်သိန်း၏ တပည့်
ဤ စကားကို သက်သေခံမရှိပဲ ပြောလျှင် တရားဥပဒေ အရ တရားစွဲခံရဖွယ် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သက်သေခံကို ထုတ်ပြရလျှင် အဗ္ဘုတဒီပနီ၊ ဦးမြင့်သိန်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေ ဓမ္မကထိကဆရာကြိး”
ဟူ၍ မျက်နှာဖုံးပေါ်မှာ စာတန်း သုံးခုပါရှိသော စာအုပ်၏ ပန်ကြားလွှာအောက်မှာ-
“ဆရာကြိး၏ သက်တော် (ပ) ထေရ၀ါဒ တပည့်များနှင့် တကွ (ပ) ဤကဲ့သို့ ပုံနှိပ် ဖြန့်ချီနိုင်ရန် အစီစဉ် ရှိပြီး ဖြစ်ပေရာ လက်ရေးတိုနည်းဖြင့် ရယူရသည် မဟုတ်သော ဤမှတ်ချက်သည် မှတ်ချက်သဘာဝလျောက် ဆရာကြီးကိုယ်တိုင် ဟောကြားသည်ကို နာယူဖူးသော ပါရမီ ရှင်တို့ အတွက် လိုလျှင်ဖြည့် ပိုလျှင်လျှော့ ပြုနိုင်ပါသော်လည်း (ပ) ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ တပည့်များ ဟူ၍ ပါရှိပါသည်။
ပန်ကြားလွာ ဒုတိယပိုင်း အနေဖြင့်
နိကာယ ဆေက၊ နိကာယ ကောဝိဒ၊ နိကာယ ဘာဏက ဖြစ်သော ရန်ကုန်မြုိ့ ဆူးလေ ဓမ္မကထိက ဆရာကြီး ဦးမြင့်သိန်းသည် (ပ) ဦးးမြင့်သိန်း ၏ ကောင်းနိုးရာရာတရားတို့ကို ဦးဥက္ကသံဗုဒ္ဓိ နှင့် မောင်ရွှေဘသိန်း တို့သည် ညစဉ်လိုလို သုံးလခန့် ဆရာကြီးအား ဖတ်ပြ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါသည်။ (ပ)
ထေရ၀ါဒ သာသနာ့ မာမက သံဃအဖွဲ့ချုပ်
(၁) ကျိုက္ကစံ ပဌမရွှေကျင် တိုက်အုပ်ဆရာတော်
(၂)သင်္ဃန်းကျွန်း မဟာအောင်မြေ ရွှေဂူတိုက်သစ်
ဆရာတော် ထေရ၀ါဒီ ဥိးအရိယ၀ံသာဘိဓမ္မ
(၆) သာကေတမြို့ အာဒိကာရုံ ကျောင်းတိုက် အဘယာရာမ ကျောင်း
ထေရ၀ါဒီ အသျှင်သောဘဏာဘိဝံသ(ဓမ္မာစရိယ) န၀ကမ္မမူး။.....(ပ)........
ပြင်ဆင်ပြီး၍ ထေရ၀ါဒ သာသနာ့မာမက အဖွဲ့ချုပ် လူကြိးမင်းများ၊ ဦးသောင်းတင်- ဥက္ကဌ၊ ဦးးစံလှိုင်- အကျိုးဆောင်၊ ဦးဘသင်- ဒု အကျိုးဆောင်၊ ဦးကြိုင်ကြိုင် (ဘဏ္ဍာရေးမူး)...(ပ)....
အသင်းကြီး တိုးတက်သော်လည်း ဣနြေ္ဒရရ နှင့် အကြောင်းသတ် ၀ိပဿနာ တည်တံ့ရေး ကြိုးပန်းရသည်ကား ဘေးက ကြည့်သူပင် သက်သာအံ့ - မထင်ပါ (ပ).......
၁၃၃၆-ခု၊ နယုန်လဆုတ် ၄ ရက်၊ (၈.၆.၇၄) စနေနေ့ ဥုးအရိယ၀ံသဓမ္မ (ခ)ဥုးဥက္ကသံဗုဒ္ဓိ၊ မဟာအောင်မြေ ရွှေဂူတိုက်သစ်၊ သင်္ကန်းကျွန်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊
ဟူ၍ ပါရှိပါသည်။ ဤသည်တို့ကို ထောက်၍ ဥိးဥက္ကသဗုဒ္ဓိသည် ဆူးလေ ဦးမြင့်သိန်း ၏ အဓိကကျသော တပည့်ကြိး တစ်ဥိးဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း၏ တပည့် ဓမ္မစေတီ ဥိးကောသလ္လသည်ကား.........
ဤစကားသည်လည်း သက်သေခံမရှိပဲပြောလျှင် တရားစွဲခံရမည့် စကားပေတည်း။ ထို့ကြောင့် သက်သေခံကို ထုတ်ပြရလျှင် မျက်နှာဖုံးပေါ်မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်- နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ညွန်ကြားလွာများ ညွန်ကြားအမှတ်- (၁) မှ (၉၃)ထိ- ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ - သာသနာရေး ၀န်ကြိးဌာန-သာသနာရေးဦးစီးဌာန ကမ္ဘာအေး စာပုံနှိပ်တိုက်၌ ရိုက်နှိပ်သည်။ သာသနာ-၂၅၅၂၊ ကောဇာ-၁၃၆၉၊ ခရစ်-၂၀၀၈” စာတန်းများပါရှိသော စာအုပ် စာမျက်နှာ (၁၉၆-၁၉၉) တို့တွင်
“ညွန်ကြားလွှာ အမှတ်(၅၀) ဆူးလေဦးမြင့်သိန်း၏ ထေရ၀ါဒ အမည်ခံ တရားဓမ္မများနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွန်ကြားခြင်း (၂၂-၁-၈၃) (၁၀-၁၁-၄၄).....(ပ).........ဆူးလေဥိးမြင့်သိန်း၏ တရားဓမ္မများကို ဒဿမ အစည်းဝေးက ဆွေးနွေးစိစစ်၍ အဓမ္မ၀ါဒ အ၀ိနယ၀ါဒ များအဖြစ် ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပြီး ယင်းအဓမ္မ၀ါဒ များကို နိုင်ငံတ၀န်းလုံး၌ တားမြစ်ပိတ်ပင်စေရေးအတွက် မြို့နယ်သံဃနာယက အဖွဲ့များသို့ ညွန်ကြားရန်”..........(ပ)...........
ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒာစာရ(အဘိဓဇ မဟာရဌဂုရု) ဥက္ကဌ ဆရာတော်၊ ဘဒ္ဒန္တတေဇောဘာသာဘိဝံသ-တွဲဖက် အကျိုးတော်ဆောင်ဆရာတော်” ဟူ၍ ပါရှိသည်။
ဤသည်တို့ကို ထောက်၍ ဆူးလေ ဥိးမြင့်သိန်းသည် အဓမ္မ၀ါဒီ ဦးဥက္ကသဗုဒ္ဓိသည် အဓမ္မ၀ါဒီ- ဖြစ်ပါသည်။ ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိ၏ တပည့် ဓမ္မစေတီ ဥိးကောသလ္လသည် အဓမ္မ၀ါဒီ ဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မစေတီ ဥိးကောသလ္လသည် ဆူးလေဦးမြင့်သိန်း၏ အဓမ္မ၀ါဒကို ဆက်လက် စွဲယူဖြန့်ချီနေသူ အဓမ္မ၀ါဒီဖြစ်ကြောင်း သူဟောကြားသော “ဒဿန သမ္ပဒါ” တရားများကို ထုတ်ပြ၍ ဖြေရှင်းပေးပါမည်။
ဓမ္မစေတီရှင်းတမ်း စာအုပ်(ထေရ၀ါဒ ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ အမှားဝင်္ကပါ) ဒီမှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ယူ၍ ဖတ်နိုင်ပါသည်..
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 12:08 AM No comments:
ဦးအေးမောင်(စာပေဗိမာန်) ဦးဆောင်ခဲ့သည့် အဓမ္မ၀ါဒ
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 12:04 AM | မိစ္ဆာဒိဌိများ Be the first to comment!
အမည်ရှိစာအုပ်ကြီးသည် ပိဋကတ်သုံးပုံတို့ကို အကုန်နီးပါးမျှ ပယ်ချထားသည့် စာအုပ်ကြီးဖြစ်၍ ၁၉၆၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအပိတ်ခံထားရပါသည်။
သို့သော်လည်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပါရမီစာပေမှ
ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာရာ တစ်အုပ်လျှင် ကျပ် ၆၀၀၀ ဖြင့် ဈေးကွက်ဝင်လာပါသည်။
ယခုအထိ ရောင်းချနေဆဲပင် ရှိပါသေးသည်။
၎င်းစာအုပ်ကြီး၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ပိဋကတ်တော်တို့ကို တစ်အုပ်၊ တစ်သုတ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဖတ်ဖူးကြဘဲ ပိဋကတ်တွေကအမှားတွေဖြစ်မှာပါဟု ပြောဆိုတတ်သူများ တိုးပွားလာကြပါသည်။
၎င်းစာအုပ်ကြီး၏ ခေတ်အဆက်ဆက်သံဃာတော်တို့အား စော်ကားထားမှုတို့နှင့်
အရှင်ကောဝိဒ(ယော)က ပြုစုစိစစ်ပြ၍ ‘ဗုဒ္ဓ၏ဗုဒ္ဓ’ စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
စာရေးဆရာကြီးပါရဂူ၏ဘာသာမဲ့ရုပ်ဝါဒသဘောများသည်ကားအထင်အရှားပင် ဆက်တိုက်ကြီးထွားလာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ဒိဗျာဝတ္ထု(ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်)တို့ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြောင်း တွေ့သိရပါသည်။
ဆရာပါရဂူ၏ ၀တ္ထုကြီးများတွင် ရုပ်ဝါဒလည်း လွှမ်းမိုး၍ ဟိန္ဒူဝါဒ (အတ္တ-အတ္တမာ)လည်း လွှမ်းမိုးနေလေရာ ဗုဒ္ဓဘာသာလာ ကံနှင့်ကံ၏အကျိုးသဘောတို့နှင့် မညီပုံတို့ကို ဇောင်းပေးတင်ပြထားကြောင်း သိရပါသည်။
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဂိုဏ်း၏ အဘိဉာဏ်ဆိုင်ရာယူပုံတို့သည် တန့်ကြည်တောင် ဆရာတော်ဦးသောမဗုဒ္ဓိ၏ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ၀န်းကျင်က အမှုဖြစ်ခဲ့သော အဓမ္မ၀ါဒဟောင်းကြီးနှင့် တူညီနေကြပါသည်။ ယင်းဂိုဏ်းကြီးသည် ယခုအခါ ပုဂံနယ်တွင် အလွန်စည်ပင်ကြီးထွားလျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒီတို့သည်ဘုရားဟောဒေသနာတို့ကိုယူ၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အား လှည့်စားဖျက်ဆီးနေကြသကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာယောင်ဆောင်လျက် ဗုဒ္ဓတရားယောင်ဖြင့် မိမိ၏၀ါဒသစ်ကို ထူထောင်စပြုနေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊
အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်း ယခုအခါတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရပါသည်။
ယင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဦးကျော်ဟိန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဦးကျော်ဟိန်းနှင့် ပတ်သက်၍
ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာခင်ဇော်လွင်(သုခချမ်းသာ)က ‘ဦးကျော် (သို့မဟုတ်) အ၀ိဇ္ဇာလောင်းရိပ်အောက်ကလူ’ ဆောင်းပါးကို ဓမ္မရံသီမဂ္ဂဇင်းတွင် ‘လောင်းရိပ်အောက်က ထွက်ခဲ့ပါ’ အမည်ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(မေတ္တာတံခွန်အသင်းက မူရင်းဆောင်းပါးကို ထေရ၀ါဒဓမ္မဒါနအဖြစ် ဖတ်ရှုလိုသူများကို ဒါနပြုပါသည်။)
ထို့ပြင် မေတ္တာတံခွန်အသင်းက ဦးကျော်ဟိန်းဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍
ဆရာတော်က စာရေး၍ ဖြေကြားပေးသည့်အပြင် တရားပွဲများတွင်လည်း
ချစ်ငယ်(ဒဿန)(ဗုဒ္ဓစာပေဆု)၏ ဂိုဏ်းကြီးသည်လည်း တစ်နေ့တစ်ခြား ကြီးထွားလာနေကြောင်း သိရပါသည်။ ယင်းဂိုဏ်း၏ဌာနချုပ်မှာ အမရပူရမြို့ဟောင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။
၎င်းတို့သည် နိဗ္ဗာန်၊ ရဟန္တာ၊ ၀ိပဿနာစသည်ဖြင့်နာမည်ကြီးကြီးစာလုံးကြီးကြီးများ
မြန်မာပြည်သာသနာတော်ကြီး၏ ဂုဏ်ဆောင် အရိယာ ဆရာ၊
သို့ရာတွင် ဆရာက မည်သူမည်ဝါဟူ၍ပင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြချေ။
၎င်းတို့၏ စာအုပ်များကို အကြောင်းညီညွတ်သောအခါတွင် ကြည့်ရှုသုံးသပ်ကြလိမ့်မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မျှကိုမူ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လထုတ်၊ ဓမ္မရံသီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပြည်သူများ သတိထားနိုင်ကြရန် အမြည်းသဘောအဖြစ် တင်ပြပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ချစ်ငယ်(ဒဿန)သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား MRTV-4 မှနေ၍ ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာများကို ဟောပြောပြသသည်အထိ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်ခဲ့ပါသည်။
(ယခုအခါ ယင်းအစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို မတွေ့ရတော့ပေ။)
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 12:04 AM No comments:
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 11:58 PM | လူသေလူဖြစ် Be the first to comment!
ထုတ်ဝေခွင့်မရှိကြောင်းတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပြီး ဖြစ်ကြပါလျက် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ဈေးကွက်ထဲသို့ အကြီးအကျယ်ထိုးဝင်လာကြပါသည်။
ထိုစဉ်ကမူ ရန်ကုန်မြို့ စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်များနှင့် မန္တလေးမြို့ ညဈေးတန်းအဟောင်းဆိုင်များသို့ စတင်၍ ၀င်လာကြပါသည်။
၀ယ်သူများရှိနေ၍ အဟောင်းရောင်းသူများက မိတ္တူကူးပေးကြသည်ဟု ထင်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့လှည်းတန်းရှိ စာပေလောကစာအုပ်ဆိုင်ကြီးများမှာအထိ နေရာယူလာကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် စုံစမ်းကြည့်သောအခါတွင် တောင်ငူမြို့နှင့် အခြားမြို့များရှိ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၀ါဒီများက မိတ္တူများ လိုက်ဖြန့်နေကြောင်းနှင့် လိုချင်သမျှရနိုင်ကြောင်းတို့ကိုလည်း သိရပါသည်။ ‘
သျှင်ဥက္ကဋ္ဌ’အမည်ရှိ စာအုပ်ကြီးဆိုလျှင် ရောင်းဈေး ကျပ်၈၀၀၀ရှိ၍
ကပ္ပပြဿနာ စသည်များလည်းရောင်းဈေး ကျပ်၂၀၀၀၀န်းကျင်စီရှိကြပါသည်။
ဘာသာရေးစာပေလောကတွင် နတ်မှီဆရာတော်ကြီး၏ အဆို၊ အမိန့်တို့ကို ကိုးကား၍ ရေးလေ့ရှိသူများအဖွဲ့က ကြောင့်ကြစိုက်နေကြောင်းသိရပါသည်။
နတ်မှီဆရာတော်ကြီးဆိုသည်မှာ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ (အဓမ္မ၀ါဒီခေါင်းဆောင်ကြီး)ကို ဆိုလိုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ထေရ၀ါဒပိဋကတ်တော်များနှင့် မျက်မှောက်ရှိ သမ္မုတိသံဃာများကို အရေအတွက် မပြုသူများပင်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 11:58 PM No comments:
ဆူးလေဦးမြင့်သိန်းဦးဆောင်ခဲ့သည့် ထေရ၀ါဒအမည်ခံ အဓမ္မ၀ါဒ
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 11:10 PM | အဓမ္မ၀ါဒဓမ္မစေတီ4Comments so far
၎င်းဂိုဏ်းကြီး၏ ပြန်လည်ကြီးထွားလာပုံမှာကား ကြောက်ခမန်းလိလိပင် ဖြစ်နေကြပါသည်။
မိတ္တူများက တစ်မျိုးဖြစ်၍ အသွင်ပြောင်းထားသည်တို့ကလည်း တစ်မျိုးလုပ်ထားကြပါသည်။
နေပြည်တော်တွင် တောင်ပိုင်းရော၊ မြောက်ပိုင်းပါ မိတ္တူဈေးကွက် ဖြန့်ကြက်ထားကြပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိခိုက် ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။
၎င်းဂိုဏ်းထုတ် မိတ္တူစာအုပ်များကို ၀ယ်လိုလျှင် စာရင်းပေးကြရကြောင်း လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည်။
ဟောပြောစည်းရုံးသူများလည်းရှိ၍ စာရင်းပေးရန်လွယ်ကူသောအဆက်အသွယ်ရှိကြောင်းလည်း သိခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်သူအမရပူရမြို့ဆရာကြိုင်ရေးသည့် ‘ဒွယနိဿိတပကာသနီကျမ်း’ တို့ကိုပင် မိတ္တူများ ရနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ဆူးလေဓမ္မကထိဆရာကြီး ဦးမြင့်သိန်းဟောကြားတော်မူအပ်သော သမ္မာပထ၀ိဘဇ္ဖအကြောင်းသတ် ထေရ၀ါဒတရားတော်များ
အမှတ်စဉ်(၂)ဂဟဏူပါဒါန်ဝါဒ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ် သံသရာတရားတော်စာအုပ်မျိုး၊
ရွှေလရောင်ဓမ္မာစရိယ သင့်ဘ၀ဦးမြင့်သိန်းရေးသားသည့် သောတာပန်အလင်းကျမ်း ဒုတိယဆင့်
ပထမတွဲနှင့် ဒုတိယတွဲစာအုပ်မျိုးစသည်တို့ကိုလည်း မိတ္တူများ ရနိုင်ကြပါသည်။
၎င်းဂိုဏ်းကြီး၏ ဦးစီးဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သူ မန္တလေးမြို့ ခင်မကန်တိုက်၊ အနန္တဂုဏ်ရည် စည်သာကျောင်း ဦးနာရဒရေးသားသည့် ထေရ၀ါဒ၀ိဘဇ္ဖ၀ါဒ၀ိပဿနာကျမ်းကြီးကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေထားကြပါသည်။
ယင်းကျမ်း၏ အမှားများကို ပြဆိုလျက် ဆောင်းပါးရှင်အရှင်ဣန္ဒာစရိယာဘိဝံသက ဆောင်းပါး ၁၆ ပုဒ်တို့ကို ရေးသားတင်ပြခဲ့သော်လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မည်သူကမျှ ဖော်ပြရန် မစီစဉ်နိုင်ကြပေ။ ယခုအခါတွင် ဓမ္မရံသီမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သင်္ကန်းကျွန်း၌ နေသော ၎င်းဂိုဏ်းဝင်တစ်ပါး ရေးသားသည့် ဗျသနတရားငါးပါးအမည်ရှိ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလည်း ဂိုဏ်းဝင်အလှူရှင်များက အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းအသင်းနှင့်တွဲ၍ လောင်းလှူကြကြောင်း သိရ၊ ဖတ်ရပါသည်။ ဦးနာရဒနှင့်အတူ ဂိုဏ်းဦးဆောင်တပည့်ကြီးလေးပါးတို့ကို ဦးမြင့်သိန်းက သာသနာပြုရန် ချန်ထားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ထိုလေးပါးတို့တွင် ဓမ္မစေတီဆရာတော်ဦးကောသလ္လ၏ဆရာဖြစ်သူ ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိလည်း တစ်ပါးပင်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
၎င်းဂိုဏ်းတရားတို့ကိုပင် ဟောပြောလျက်ရှိပါသည်။ တရားခွေပြန့်ပွားစေရေးအတွက် လူများကို အဖွဲ့များ ဖွဲ့စေလျက် တရားစိတ်ဝင်စားသော ချမ်းသာသူများကို စုံစမ်းချဉ်းကပ်ပြီး တရားနာယူစေကာ ကြည်ညိုစေပြီးမှ တရားခွေတစ်စုံလျှင် ကျပ် ၄၀၀၀၀ စသည်ဖြင့် သာသနာပြုကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် ဆူးလေဦးမြင့်သိန်းသည် အဓမ္မ၀ါဒဆုံးဖြတ်ခံရသူဖြစ်၍သာလျှင် ဦးမြင့်သိန်း၏ ထေရ၀ါဒအမည်ခံ အဓမ္မ၀ါဒဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ရခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်ကမူ ဂိုဏ်းဦးစီးခေါင်းဆောင်မှာ ဓမ္မစေတီဆရာတော်ကြီး (ဒီပဲယင်းကျောက်စာတိုင်ဆရာတော်ကြီး)ဟူ၍ ရှိပါသေးသည်။ သိလိုပါက ‘၀ိပဿနာညွန့်ပေါင်းကျမ်းကြီး’တွင် လေ့လာကြည့်ကြပါကုန်။
ယင်းဆရာတော်ကြီးကို အကြောင်းပြု၍ ‘ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ’ ဟု ဘွဲ့ခံထားကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။ ၎င်းဂိုဏ်းကြီး၏ မူလနာမည်အပြည့်အစုံမှာ ‘ထေရ၀ါဒ ၀ိဘဇ္ဖ၀ါဒ သမ္မပထကြောင်းသတ် ၀ိပဿနာဂိုဏ်း’ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို ပြုပြင်လျက် အသွင်သစ်ဖြင့် နာမည်တပ်သောအခါတွင်ကား ‘ထေရ၀ါဒဒဿနသမ္ပဒါနည်း’ ဟူ၍ ဖြစ်လာကြောင်းလည်း သိရပါသည်။ အဓမ္မ၀ါဒဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာတားမြစ်ထားပြီးသည့် မိစ္ဆာဝါဒကြီးများတွင် ဆူးလေဦးမြင့်သိန်းဂိုဏ်းဆိုရာ အဓမ္မ၀ါဒသည် အမှတ်(၆) အဖြစ် ပါဝင်ပါသည်။
၎င်းအဓမ္မ၀ါဒဂိုဏ်းကြီးနှင့် အဓမ္မ၀ါဒတရားများမည်မျှလောက်အထိပြန်လည်ကြီးထွားလာကြောင်းမှာ အထူးတင်ပြဖွယ်မရှိပြီ။
၁၉၈၂ခုနှစ်ကပင်ဆူးလေဦးမြင့်သိန်းဝါဒရှိသူတို့ကို အဓမ္မ၀ါဒီအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 11:10 PM4comments:
ဗုဒ္ဓသာသနာကိုအန္တရာယ်ပြုနေသည့် အမျိုးဖျက်၊ ဘာသာဖျက်၊ သာသနာဖျက် မိစ္ဆာဒီဌိများ၊
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 9:24 PM | မိစ္ဆာဒိဌိများ Be the first to comment!
စာရေးသူတို့ မသိမီလိုက်သော တစ်ချိန်ကတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူသေလူဖြစ် အဓမ္မ၀ါဒတစ်ခုကို မြန်မာ့သာသနာ့ အာဇာနည်များက နှိမ်နင်းခဲ့ကြဖူးသည်။ ထိုနှိမ်နင်းမှုတွင် ထို အဓမ္မ၀ါဒီခေါင်းဆောင်သည် ခေါင်းဆောင်ပီသစွာ သူတစ်ဦးတည်း ခေါင်းခံခဲ့ပါသည်။
သို့သော်သူ၏ ခေါင်းဆောင်ပီသမှုသည် မြန်မာ့သာသနာကို ဖျက်ဆီးရန် အကြံဆိုးများ အပြည့်အ၀ ပါဝင်ခဲ့လေသည်။သူ၏ တပည့်ကျော် လေးယောက်ကို မြန်မာသာမက ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ချထားနိုင် ခဲ့လေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော တပည့်မှာ ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိနှင့် မြင့်သိန်းဦး(ဆူးလေ) တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ထိုနှစ်ယောက်က မြန်မာနိုင်ငံသာသနာကို ဖျက်ဆီးရန် အကြံဆိုးဖြင့် လျှို့ဝှက်နေထိုင်ပြီး တပည့်ကျော်များ မွေးမြူထားခဲ့သည်။ သူတို့ မွေးထုတ်လိုက်၍ အောင်မြင်သွားသော တပည့်များထဲတွင် ၈၈ နောက်ပိုင်း ကျောင်းသားများကို ကယ်လိုက်ပြီး အဓမ္မ၀ါဒကို ရိုက်သွင်းနိုင်ခဲ့သော ၁၉၉၀တွင် တရားစဟောခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ နောက်ပိုင်း နာမည်ရလာသော တရားပေါင်း ၃၉၉ ပုဒ်ကို ဗွီစီဒီ ချပ်ပေါင်း ၅၃၂ ချပ်ဖြင့် ထုတ်နိုင်ခဲ့သော ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လမှာ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ယောက်အောင်မြင်သွားသူမှာဦးဉာဏဆိုပြီးအမည်နှင့်အသွင်ပြောင်းကာ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ(မိုးပြာဝါဒ)ကို တည်ထောင်လိုက်နိုင်သူ ဖြစ်သည်။
ထိုသူက စာမတတ်သော်လည်း စာတတ်သော ဦးကုမာရဆိုသည့် ရဟန်းနှင့် ဦးဝိစိတ္တဆိုသည့် ရဟန်းကို မြူဆွယ်နိုင်သည့်အပြင် ဥပဒေပညာရှင်များ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပုံနှိပ်တိုက်များကိုပါ မြူဆွယ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် အချိန်တို အတွင် အရှိန်အဟုန် ပြင်းပြင်းဖြင့် အောင်မြင်သွားခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က နိုင်ငံသံဃာခေါင်းဆောင် ဦးဣန္ဒာစာရနှင့် ဦးတေဇောဘာသတို့က စာတင်ခဲ့ရာ ရှင်ဉာဏမှာ အ၀တ်ပြာဝတ်လျှက် တရုတ်ဘုန်းကြီးလိုလို ဂျပန်ဘုန်းကြီးလိုလို လုပ်ကာ မြစ်ကြီးနားသို့ တိမ်းရှောင်ခဲ့ပြီး နောက်မှ ရန်ကုန်မိုးပြာခြံသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးအခြေအနေ လူထုစီးပွားရေးအခြေအနေတို့ကို ထောက်ဆရင်း ၎င်းဝါဒတွေနှင့် ဆက်စပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၌ အဓမ္မ၀ါဒီဂိုဏ်းများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပေ၏။
စာရေးဆရာပါရဂူ၏ ဘာသာမဲ့ ရုပ်ဝါဒ အဓမ္မ၀ါဒ၊
တန့်ကြည်တောင် ဦးသောမဗုဒ္ဓိ ဦးဆောင်ခဲ့သည့် အဓမ္မ၀ါဒ၊
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ မိုးပြာဝါဒကို ရတနာ (http://www.yatanar.co.cc) စသော ဘလော့ဂါများစွာနှင့် နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ အပါအ၀င် ၎င်းတို့ အဓမ္မအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ အဓမ္မ၀ါဒကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် စာအုပ်ပေါင်း ၆၄ အုပ်ကို မြန်မာ့သာသနာ့ စာပေအတွင်း ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိနေသည်ကို မည်သူမှ မရှင်းနိုင်တော့။ ထိုအရေးကို သိသော သံဃာ့ခေါင်းဆောင်များက (၃.၆.၂၀၀၇) ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ (၂၂.၁၁.၂၀၀၈) ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ (၁.၃.၂၀၀၉) ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ် ၎င်းအဓမ္မစုတို့ အတွက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များ ထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်း ခုဆိုလျှင် ပိုမိုအတင့်ရဲလာပြီးနောက် နေပြည်တော်သို့ ၎င်းတို့၏ ၀ါဒကို ဓမ္မ၀ါဒဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာပေးပါရန် စာတင်လာခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။
ဦးကောသလ္လ၏ ထေရ၀ါဒသည် ပုဆိုးဝတ်မထေရ် ဦးညွန့်၊ ဦးမြင့်သိန်း တို့၏ ၀ါဒဖြစ်သည်။
ဓမ္မစေတီရှင်းတမ်း စာအုပ်(ထေရ၀ါဒ ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ အမှားဝင်္ကပါ) ဒီမှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ယူရန်
အောက်မှ link ကို Download လုပ်၍ ဖတ်ပါ
မိုးပြာ ဂိုဏ်းအကြောင်း နှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 9:24 PM No comments:
မေတ္တာတံခွန် | 6:41 AM | သုတ Be the first to comment!
ဘာသာရေးပတ်သက်ပြီး ပုခုံးပြောင်းတာဝန်ကို တက်တက်ကြွကြွ စိတ်ပါဝင်စားစွာ လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့.. လူငယ်မျိုးဆက်သစ် တွေကြားမှာ.. စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် အယူအဆတစ်ခုကို မကြာခဏ တွေ့ရှိနေရပါတယ်..အဲဒါကတော့ ဘုရားဟော တရားစာပေများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး.. ကိုယ်နားမလည်နိုင်တဲ့ အယူအဆ၊ ခေတ်ကာလ.. အတွေးအမြင်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အတွေးအခေါ်.. ကိုယ့်အမြင်မှာ အတိတ္တရ၀ုတ္တိဆန်တယ်ထင်တဲ့.. အရေးအသားတွေ.. စာပေတွေ.. တွေ့ရင်၊ မြင်ရင်.. ဒါမှမဟုတ် ဘာသာခြားတွေက မေးမြန်းလာရင်.. ဒါ.. အဋ္ဌကထာထဲက ဟာတွေပဲ.. ဘုရားဟော ပါဠိတိုက်ရိုက် မဟုတ်ဘူး..ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသရဲ့ လက်ရာတွေပဲ.. ဒါတွေကို ကျုပ်တို့က လက်မခံဘူး.. စသဖြင့် အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာတွေကို ခါးသီးစွာ လူလိမ်တွေက ပြုစုထားတဲ့ ကျမ်းစာတွေပမာ.. ပြောတတ်၊ ဆိုတတ်ကြတယ်..
တချို့လူငယ်တွေကလည်း.. အဋ္ဌကထာဆိုတာ.. ပါဠိတော်တွေကို ပုံပြင်တွေနဲ့ တန်ဆာဆင် ဟောပြောထားတာပဲ. ဘုရားဟော တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူး စသဖြင့်..အဋ္ဌကထာဟူသည်.. မုသာဝါဒ အပေါင်းတို့ စုဝေးရာ စာပေသဖွယ်.. မိမိဘာသာ စာပေအနှစ်သာရကို သေးသိမ်အောင်၊ ချိုးနှိမ်ပြောဆိုလေ့ ရှိတာကို မကြာခဏတွေ့မြင်နေရပါတယ်...
ဒီအတွေးအခေါ်တွေ..ဘယ်ကရောက်လာပြီး ဘယ်လိုကျယ်ပြန့်လာတယ်ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်တော့..
ပင်ကိုယ် သဘာဝအားဖြင့် လူငယ်တွေဟာ.. ဆန်းသစ်မှု၊ ရှေးရိုးစွဲအယူအဆများကို ဆန့်ကျင်လိုမှု၊ သဘာဝယုတ္တိကိုပဲ လက်ခံယုံကြည်နိုင်မှုစတဲ့ အမူအကျင့်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်..
ဘာသာခြားတွေနဲ့ ဘာသာရေးကိစ္စ ငြင်းခုန်ပြောဆိုကြတဲ့အခါ..ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းမှာ အခိုင်အမာရှိခဲ့တဲ့ ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံလိုို မှတ်တမ်းစာအုပ်တွေကို လေ့လာကိုးကား မိတတ်ကြတယ်.. ဒါကတော့ အခုမျိုးဆက်မှ မဟုတ်ပါဘူး.. ရှေ့ကမျိုးဆက်မှာလည်း ဒီလိုပဲ ရှိခဲ့တာပါပဲ.. ဒီစာတွေဖတ်ပြီး မိမိဘာသာဖက်က ပိုင်နိုင်စွာ ချေပပြောဆိုနိုင်တဲ့ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ-ဟာ စာဖတ်သူရဲ့ အတွေးပုံရိပ်မှာ.. တကယ့်လူစွမ်းကောင်း ဟီးရိုးကြီးပမာ ထင်မြင်ယူဆမိတတ်တာ သဘာဝပါ..ဒီကိစ္စမှာ တကယ်လည်း တော်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါး ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံရမှာပါပဲ..
ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရကို လေ့လာချင်သူ လူငယ်တွေဟာ စာအုပ်စင်မှာ ဘယ်စာအုပ်ကို ဖတ်ရင်ကောင်းမလဲလို့.. စာအုပ်ခေါင်းစဉ်တွေကို အရင်လေ့လာကြည့်တာအခါ.. ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ဟာ မိမိသိလိုတာတွေကို သိရှိနိုင်မယ့် စာအုပ်လို့ စာအုပ်နာမည်ကို ကြည့်ပြီး ထင်မြင်ယူဆမိတတ်ကြတယ်..
ဒီလိုနဲ့.. ဘာသာရေးစာပေမျိုးစုံကို ထောင့်စိအောင် မလေ့လာမီ.. တနည်းအားဖြင့်.. စာဖတ်ပါးမ၀ခင်..ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို မြင်နိုင်သေးတဲ့ အသိဥာဏ် မရင့်ကျက်မီ.. ဘာသာ၊ သာသနာအပေါ်ထားအပ်တဲ့ သဒ္ဓါတရား အားမကောင်းမီ.. အဲဒီစာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှုမိသူ လူငယ်တွေဟာ..အဲဒီစာအုပ်တွေရဲ့ အယူအဆမှားတွေကို အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး.. တကယ့်ကို လက်တွေ့ဆန်တဲ့ စာအုပ်တွေလို့ ထင်မြင်ယူဆသွားတတ်ကြတယ်..တကယ်တော့ အဲဒီစာအုပ်တွေကို ရေးသားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သညာသိ၊ စာသိမျှနဲ့ လမ်းဆုံးနေကြသူများ ဖြစ်တဲ့အပြင်.. ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးအပေါ် သဒ္ဓါတရား လွန်စွာနည်းပါးလှတဲ့ အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာ ဖြစ်ပါတယ်.. သူတို့ဟာ ဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရကို လက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှု လုံးဝ မပြုလုပ်ဘဲ အနောက်တိုင်းက ဘာသာခြား စာရေးဆရာများရဲ့ လိုရာဆွဲရေးတဲ့ စာအုပ်၊ စာပေတွေကိုသာ.. တကယ့်အားကိုးအားထားပြုဖွယ် အနှစ်သာရ အစစ်အမှန်များပမာ.. ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ကိုးကားခဲ့ကြတာပါ..
ပြည်တွင်းက ပရိယတ်၊ ပဋိပတ်စွယ်စုံ တတ်ကျွမ်းသူ.. လက်တွေ့ကျင့်ကြံ ပြီးမြောက်ကြသူတွေ ရေးသားပြုစုတဲ့ စာပေတွေကိုတော့ မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ကြတယ်..အနှစ်သာရကို အထဲထိ နှိုက်ပြီးရှာဖွေဖို့ သဒ္ဓါတရား အခြေခံတောင် မရှိ၊ မဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး..
အဲဒီဘာသာခြား စာရေးဆရာတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရ သဘောသဘာဝအမှန်ကို လက်တွေ့ကျင်ကြံမှုအပိုင်း.. လုံးဝမရှိပဲ.. ပျောက်သောသူ ရှာဖွေသလို ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခုနှစ်သက္ကရာဇ်၊ သမိုင်းအမှတ်အသားတွေထဲမှာ.. ရှာဖွေသုံးသပ်ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်.. တကယ်တော့ လက်ရှိအထင်အရှား ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အဖြစ်မှန်တွေကို အမှန်တကယ်သိချင်ရင်.. အရင်အားထုတ်လေ့လာ ကြည့်ရမှာပါ.. လောကရဲ့ အမှန်တရားတွေကို မြင်နိုင်တဲ့ အသိဥာဏ် အထိုက်အလျောက် ရလာတော့မှ.. ဗုဒ္ဓရဲ့မဟာဥာဏ်တော်ကြီးကို အရိပ်အမြွက် သိနားလည်လာနိုင်တာပါ.. အနှစ်သာရကို သင့်တင့်အောင်နှလုံး သွင်းနိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်ရှိမှ ပြင်ပဗဟိဒ္ဓိကိစ္စတွေကို သမာသမတ်ကျစွာ ဆင်ခြင်နိုင်မှာပါ..
အခုတော့ လေ့လာသိရှိထားတဲ့ သမိုင်းနယ်ပယ် ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးကိုပဲ ဗဟိုပြုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သုံးသပ်တင်ပြထားတာပါ..အနောက်တိုင်း စာပေတွေကိုမှ အထင်ကြီးကိုးကားတတ်တဲ့ ပြည်တွင်းက စာရေးဆရာကြီးအချို့ကလည်း ဒီအမှားတွေကို အလွန်တရာ အထင်ကြီးလေးစားစွာနဲ့ ကိုးကားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သေးသိမ်အောင်နှိမ့်ချ ဆော်ကားတဲ့ အရေးအသားတွေကို တွေ့နေရပါတယ်.. ဒီလို စော်ကားရတာကို ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုလို ယူဆပြီး သူ့ရဲ့ကလောင်အမည်အရှေ့မှာ ..... ကျမ်းပြုဆရာဆိုတဲ့.. ၀ိသေသနပုဒ်ကိုတောင် ဖြည့်စွက်ထား လိုက်ပါသေးတယ်..
သူတို့တတွေဟာ.. ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ကနေ လှန်ချင်တော့ အဘိဓမ္မာဆိုတာ ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ခုနှစ်သက္ကရာဇ် တွေကို အခြေခံပြီး ကိုးကားပြောဆိုကြပြန်တယ်..တကယ်တော့ အဘိဓမ္မာဆိုတာ ၀ိနည်း၊ သုတ္တံတို့ရဲ့ အနှစ်ချုပ်ပါ.. ပိုပြီး သာလွန်မြင့်မြတ်ပါတယ်..အဘိဓမ္မာကို နားလည်နိုင်ဖို့ဆိုတာ သညာသိ ဥာဏ်ရည်အသွေးလောက်နဲ့ မရနိုင်ပါဘူး.. သဒ္ဓါတရားကို အခြေခံပြီး ၀င်ရောက်လေ့လာရတာမျိုးပါ.. သဒ္ဓါတရားမှ အခြေခံမရှိရင် ဗုဒ္ဓရဲ့ အဘိဓမ္မာတွေကို ဘယ်လိုမှ
ထိုအကြောင်းတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဥပမာ တခု ဖော်ပြအံ့။
____ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို အမည်တတ်ပြီး ရေးသားခဲ့သူရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို သိသာစေရန် ဖော်ပြပါမည်။ ထိုစာအုပ်ကို ပြုစုသူကား ဦးအေးမောင်(စာပေဗိမာန်ဆုရ) ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေ၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာသော အဓမ္မ၀ါဒီများထဲတွင် တစ်ယောက် အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအေးမောင်ရဲ့ ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒဆိုတဲ့ စာအုပ်ကြီးဟာ ထေရ၀ါဒပိဋကတ်တော်တို့ကို နှိမ်ချပြီးဖျက်စီးရေးသားတဲ့ စာအုပ်ကြီး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် (၁၉၆၄) ခုနှစ်မှ ယခုချိန်ထိ တလျှောက်လုံး နိုင်ငံတော်မှ ပိတ်ပင်ထားတဲ့ စာအုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း (၂၀၀၄) ခုနှစ်တွင် ပါရမီစာပေမှ တအုပ်လျှင် (၆၀၀၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့် ပြန်လည် ဖြန့်ချီလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိပင် ဆက်လက် ရောင်းချနေသည်ဟု သိရပေ၏။
ဒီစာအုပ်ကြီး၏ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ပိဋကတ်တော်လာ တရားတော်တို့ကို တပိုင်းတစလောက် သိရုံနဲ့ ခြေခြေမြစ်မြစ်မသိဘဲနဲ့ ပိဋကတ်တော်လာ တရားတော်တွေက အမှားတွေဖြစ်မှာပါ ဟူသော သိမ်ဖျင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်များ ယူဆလာတဲ့ သူများသာ တိုးပွားလာပါသည်။ အဘိဓမ္မာပယ်ဝါဒ များလည်း တိုးပွားလာပါသည်။ ဦးအေးမောင်ရဲ့ ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒဆိုတဲ့ စာအုပ်ကြီးရဲ့ ပိဋကတ်တော်လာ တရားတော်များကိုနှိမ်ချရေးသားထားမှု၊ ဖျက်ဆီးရေးသားထားမှု၊ ခေတ်အဆက်ဆက် သံဃာတော်တို့ကို စော်ကားထားမူ့ မူလဗုဒ္ဓ၀င်ကို ဖျက်ဆီးထားမှုတို့ကြောင့် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ စာအုပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာကို ဆောင်းပါးရှင် ဆရာတော် အရှင်ကောဝိဒ(ယော)မှ ပြုစုစိစစ်၍ ဓမ္မရံသီ မဂ္ဂဇင်းတွင် အခန်းဆက် ဆောင်းပါးများ ရေးသားခဲ့ဘူးပါသည်။ ယခုအခါ ထိုဆောင်းပါများကို ပြန်လည်စုစည်း၍ ဗုဒ္ဓ၏ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ဆိုသော စာအုပ်အမည်ဖြင့် နှလုံးလှစာပေမှ တအုပ်လျှင် ၁၅၀၀ကျပ်နှုန်းဖြင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီနေပါသည်။ ဦးအေးမောင် ၏ စာအုပ်သည် အဓမ္မ၀ါဒ တရားများဖြစ်ကြောင်း သိလိုပါလျှင် ထိုစာအုပ်ကို ၀ယ်ယူဖတ်ရှူလျှင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု အကြံပြုအပ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေများနှင့် အကျွမ်းဝင်မှု နည်းပါးသေးလျှင် ထို ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ဆိုသော ဦးအေးမောင် (စာပေဗိမာန်ဆုရ) ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်၏ စာအုပ်ကြီးကို မဖတ်လျှင်ကား အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ဆိုသော ထိုစာအုပ်ကြိးထဲမှ ရွှေမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မှတ်သားသင့်တဲ့ အချက်လေးတော့ ထုတ်ပြပါမည်။
____" မြန်မာဗုဒ္ဓ၀ါဒီတို့ ဆင်ခြင် သုံးသပ်သင့်သော ဘာသာရေး ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုမှာ ကလေး
သူငယ်များကို ရှင်ပြုသော ထုံးစံဖြစ်၏ ။ မြန်မာတို့သည် မိမိတို့၏ သားသမီးများကို အသက်ငယ်ရွယ်စဉ် ရှင်ပြုလေ့ရှိကြ၏ ။
၀ိနည်းပိဋကတ်၌ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတို့အား အသက် ၁၅ နှစ်မပြည့်သေးသော သူငယ်အား ရှင်မပြုအပ် ။ ရှင်ပြုသောရဟန်းအား ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်စေဟု ပညတ်တော်မူသည် ။ (ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၊ စာ-၅)"_____
၀ိနည်းပိဋကတ်လာ ပညတ်တော်မူချက်နှင့် အဖြစ်အပျက်အလုံးစုံကို ထုတ်ပြပါမည်။ တစ်ရံရောအခါ တစ်ဦးသော အမျိုးသည် ယဉ်းအနာ`အဟိဝါတကရောဂါ´ ဖြင့် သေလေ၏။ ထိုအမျိုး၌ သားအဖ နှစ်ယောက်တို့သည်သာလျှင် ကြွင်းကျန်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် ရဟန်းတို့၏ အထံ၌ ရဟန်းပြု၍ အတူတကွ ဆွမ်းခံလှည့်လည်ကြကုန်၏။ ထိုအခါ အဖအား ဆွမ်းလှူသည်ရှိသော် သူငယ်သည် ပြေးလာ၍ `ဖခင် ကျွန်တော့်အားလည်း ပေးပါလော့၊ ဖခင် ကျွန်တော့်အားလည်း ပေးပါလော့` ဟုဆို၏။ လူတို့သည် `သာကီဝင်မင်းသာ ဘုရားအနွယ်တော်ဖြစ်သော ရဟန်းတို့သည် မမြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်ကုန်၏။ ဤသူငယ်သည်ကား ရဟန်းမိန်းမမှ မွေးဖွား၏` ဟု ကဲ့ရဲ့ ကုန်၏။ ရှုတ်ချကုန်၏။ အပြစ်ပြ ပြောဆိုကြကုန်၏။
ရဟန်းတို့သည် ကဲ့ကဲ့ ရှုံ့ချ အပြစ်ပြောကြသော ထိုလူတို့၏ စကားကို ဘုရားရှင်အား လျှောက်ကြကုန်၏။ ထိုအခါ ဘုရားရှင်က ရဟန်းတို့ အသက် ၁၅ နှစ်မပြည့်သေးသော သူငယ်အား ရှင်မပြုအပ် ။ ရှင်ပြုသော ရဟန်းအား ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်စေဟု ပညတ်တော်မူ၏ ။
ထိုအခါ၌ သဒ္ဓါတရားရှိ၍ ကြည်ညိုတတ်သော အရှင်အာနန္ဒာ၏ အလုပ်အကျွေး အမျိုးသည် ယဉ်းအနာ`အဟိဝါတက ရောဂါ´ ဖြင့် သေလေသော် သူငယ်နှစ်ယောက်တို့သာ ကြွင်းကျန်ကုန်၏။ ထိုသူငယ်တို့သည် ရှေးအလေ့အကျက်အားဖြင့် ရဟန်းတို့ကို မြင်သောအခါ ပြေးလာသည်ရှိသော် ရဟန်းတို့သည် မောင်းမဲဤနှင်ထုတ်ကြကုန်သောအခါ ထိုသူငယ်တို့သည် ငိုကြွေးကြကုန်၏။
ထိုအခါ အရှင်အရှင်အာနန္ဒာအား `မြတ်စွာဘုရားသည် အသက် ၁၅ နှစ်မပြည့်သေးသော သူငယ်အား ရှင်မပြုအပ် ။ ရှင်ပြုသော ရဟန်းအား ဒုက္ကဋ်အာပတ်သင့်စေဟု ပညတ်တော်မူ၏။ ဤသူငယ်တို့သည် ၁၅ နှစ်မပြည့်သေးကုန်၊ အဘယ်သို့သော အကြောင်းဖြင့် ဤသူငယ်တို့သည် မပျက်စီးကုန်ရာပါအံ့နည်း` ဟု အကြံဖြစ်တော်မူ၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားအား လျှောက်ထားတော်မူ၏။ ဘုရားရှင်က ပြန်လည်မိန့်ဆိုသည်မှာ -"ချစ်သားအာနန္ဒာ ထိုရှင်ပြုချင် ကြသောကလေးတို့သည် ကျီးတို့ ချောက်လန့်နိုင်ပါ၏လားလို့ မေးတော်မူ၏။ ထိုအခါ ကျီးတို့ကို ချောက်လန့်ခြင်း၌ စွမ်းနိုင်ကြပါသည်ဟု ဖြေလေသော် ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အသက် ၁၅ နှစ်မပြည့်သေးသော်လည်း ကျီးတို့ကို ချောက်လန့်ခြင်း၌ စွမ်းနိုင်ကြပါက ရှင်ပြုပေးခြင်းကို ခွင့်ပြု၏။ ရှင်သာမဏေ ပြုပေးနိုင်၏။ ရှင်ပြုခြင်းငှာ ခွင့်ပြု၏` ဟု ဘုရားရှင် မိန့်တော်မူ၏။
အထက်ပါ ပညတ်ချက်များကို ကြည့်လျှင် အသက် ၁၅ နှစ်မပြည့်လျှင် ရှင်မပြုအပ်ဟူသော ပညတ်ချက်သည် မူလပညတ်ချက်ဖြစ်၏။ အသက် ၁၅ နှစ်မပြည့်သေးသော်လည်း ကျီးတို့ကို ချောက်လန့်ခြင်း၌ စွမ်းနိုင်ကြပါက ရှင်ပြုပေးနိုင်၏` ဟူသော ထိုပညတ်ချက်သည် မူလပညတ်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရာလည်း ရောက်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုခေတ်တွင် အသက် ၁၅ နှစ် မပြည့်သေးသော်လည်း ရှင်ပြုပေးခြင်းသည် အပြစ်အားဖြင့် တစုံတရာမဖြစ်ပေ။ သို့ရာတွင် မူလ ပညတ်တော်မူအပ်သော အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်သည် အထက်ပါကဲ့သို့ အခက်ခဲရှိမှသာ အသက် ၁၅ နှစ်မပြည့်မီ ရှင်ပြုလိုက် ပြုပေးသင့်၏။
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကျမ်းဆရာ ဆက်လက်ပြဆိုအပ်သော အောက်ပါမှတ်ချက်မှာ မှန်ကန် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်များ အလေးအနက်ထားဤ ပြုသင့်သော အချက်ဖြစ်ပေသည်။
__"ဤပညတ်တော်မူချက်မှာ လျော်ကန်သင့်မြတ်လှပေသည် ။ ရှင်သာမဏေအဖြစ်သည် တတ်သိလိမ္မာသော အရွယ်သို့ ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည့် သူငယ်များအဖို့သာလျှင် အကျိုးရှိသည် ။ ယခုကာလ၌ မိဘများက ရှင်ပြုသော သူငယ်များမှာ အများအားဖြင့် အသက်ငယ်ရွယ် ဥာဏ်နုနယ်သေးသော သူများ ဖြစ်ကြရကား ဘာသာရေးဘက်၌ တစ်စုံတစ်ရာ ထူးခြားပြောင်းလဲခြင်း မရှိချေ ။ သို့ဖြစ်၍ ယခုခေတ် လူငယ်များသည် အားလုံးလိုလို ရှင်သာမဏေ ဖြစ်ခဲ့ကြဖူးပါလျက် ဘာသာရေးအသိတရား ခေါင်းပါးနေကြ၏ ။ မိဘများသည် မိမိတို့ပြုသောကောင်းမှု အတွက် နှစ်သိမ့် ကျေနပ်ကြပေမည် ။ သို့ရာတွင် ကလေးကို ရှင်ပြုခြင်းသည် မိဘများ၏ ကျေနပ်မှု ၊ ကုသိုလ်ရမှုအတွက် ဖြစ်ပါသလော ။ ကလေး၏ အကျိုးစီးပွား ၊ သာသနာတော်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဖြစ်သင့်သည် မဟုတ်ပါလော ဟု မေးဖွယ်ရှိ၏ ။ (ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၊ စာ-၅)"___
ဤနေရာတွင် မိဘများဘက်ကသာ ပြင်ဆင်သင့်သည်မဟုတ်သေး။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်များ ဘက်ကလည်း ငယ်ရွယ်နုနယ်သေးသော ကလေးသူငယ်များကို ရှင်ပြုပေးဖို့ရာ လက်မခံသင့်ပေ။ ယခုကာလ ရှင်ပြုကြသော သူငယ်အချို့ကား သင်္ကန်းနိုင်ဖို့၊ သရဏဂုံ ပီသဖို့ နေနေသာသာ မိခင်နို့ပင် မပြတ်တတ်သေး။ ညအိပ်လျှင် ဖခင်ဖြစ်သူက အတူလာအိပ်ပေးရ၏။ ဆွမ်းစားလျှင် ခွင့်ကျွေးရ၏။ ညညဆိုလျှင် ကလေးငိုသံ တညံညံနှင့် အမှန်ပင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလှ၏။
Posted by မေတ္တာတံခွန် at 6:41 AM No comments:
မေတ္တာတံခွန် | 10:41 PM | ဓမ္မမိတ်ဆွေ | သုတ | အခြားကလောင်ရှင်များ 1 Comment so far
ကလောင်ရှင် = ဓမ္မမိတ်ဆွေ-မစိုးရိမ်ကျောင်းသားဟောင်း စိုင်းသိင်္ခ( တောင်ကြီး )
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြားဘာသာခြားတွေအနေနဲ့ ဖျက်စီးလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျွန်တော်တို့ထဲက စုံးပြူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကပဲဖျက်စီးလို့ရပါတယ်။ တစ်ခြားဘာသာခြား တွေ အနေနဲ့ကတော့ ဖျက်ချင်ရင်တောင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ စေတီပုထိုးတွေ ကျောင်းကန်တွေ ကိုပဲဖျက်လို့ရချင်ရမယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ ရတနာသုံးပါကို ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကိုတော့ သရဏဂုံ ပျက်လောက်အောင်တော့ သူတို့တွေမဖျက်စီးနိုင်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို သတ်လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်တွေသေရင် သေသွားပါစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရတနာသုံးပါး အပေါ်မှာ ယုံကြည်မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်ကတော့ သေသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
စေတီပုထိုး ကျောင်းကန် ဆိုတာလည်း ဘာသာခြားတွေ မဖျက်ဆီးလည်း တစ်နေ့တော့ သင်္ခါရ သဘောတရားအရ ပျက်စီးမှာမလွဲမသွေပါ။ ဒီတော့ သိစေချင်တာ ကတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားမှာ တည်နေတဲ့ သရဏဂုံကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံတွေကသာ ဖျက်စီးနိုင်တာပါ။
ဥပမာတစ်ခု ပြောရရင်တော့ဗျာ။ ဇမ္ဓူရာဇ်ရွှေစင်ကို ကျောက်သံ ပတ္တမြားက ဖျက်ဆီးလို့ မရနိုင်သလို အဲဒီကျောက်သံ ပတ္တမြားကိုလည်း ဇမ္ဓူရာစ်ရွှေစင်ကဖျက်စီးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အမျိုးမတူတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
ဇမ္ဓူရာဇ် ရွှေစင်အစစ်ကိုတော့အဲဒီရွှေနဲ့တူတဲ့ဇမ္ဓူရာဇ် ရွှေအတုကပဲဖျက်လို့ရသလို။ ကျောက်သံ ပတ္တမြား အစစ်ကိုလည်း ကျောက်သံပတ္တမြား အတုကပဲ ဖျက်စီးလို့ရပါတယ်။ အတုဆိုတာမျိုးကတော့ အစစ်နဲ့ ခွဲခြားလို့တော်တော်နဲ့ မရကောင်းဘူးလေ။
အဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ အတုအယောင်တွေက (အယောင်ဆောင်တွေက)
မှတ်ပုံတင်ထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံတွေကပဲ ဖျက်စီးနေကြတာပါ။
ဒီဥပမာကို ကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ လောကရဲ့တုနှိုင်းမဲ့ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုတော်မူထိုက်တဲ့
မဟာသတ္ထာ ဘုရားရှင်ကပေးခဲ့တဲ့ဥပမာပါ။ သူတော်ကောင်းများ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
အခြားဘာသာတွေလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ဘာသာတူတွေကပဲ သူတို့ရဲ့ ဘာသာကို အခြားဘာသာတွေက အထင်အမြင် သေးလာအောင် ဖန်တီးပြီး ဖျက်စီးနေကြတာပါ။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ အခြားဘာသာဝင်တွေကို မုန်းတီးနေမယ့်အစား တိုက်ခိုက်နေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘာသာထဲကစုန်းပြူးတွေကို အရင်ဆုံး သုတ်သင်စေချင်တယ်။ သူတို့မကျေနပ်လို့ အခြားဘာသာထဲ ကူးပြောင်းသွားရင်လည်း နှမြောစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာထဲမှာ ရှိနေရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် သာသနမလ၀ိသောဓနီ ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အန္တရာယ်ကြီးမားလှတဲ့ ဆူးငြောင့်ခလုပ်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
သူ့ဘာသာသူ ဘာကြီးပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ။ ဘယ်လောက် နာမည်ပဲကြီးနေကြီးနေ။ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့အတွက် သရဏဂုံပျက်လောက်တဲ့ အထိဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ သုတ်သင်ရ မှာပါပဲ။ သုတ်သင်တယ်ဆိုတာ သူ့ကိုသတ်ဖို့ ညင်းပန်းနှိပ်စက်ဖို့ဆိုလို တာမဟုတ်ပါဘူး။
သာသနာတော် သန့်ရှင်း တည်တံ့ရေး အတွက် တစ်မျိုးမျိုးတော့ စဉ်းစားရမှာပါပဲ။
အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပဲ ကိုယ်တတ်နိင်တဲ့ အားနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ဖော်ဝပ်မေးတွေ ပို့ရင်းသာသနာ ပြုကြရတာပေါ့ဗျာ။ သာသနာပြုတယ် ဆိုရာမှာလည်း သူ့အသက်ကိုလည်းထိခိုက်စေ သူ့စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကိုလည်း ပျက်စီးစေ ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးကတော့မကောင်းဘူးဗျာ့။ အဲလိုမျိုးဖြစ်ပြီးမှ သာသနာ တည်တံ့တယ်ဆိုတာ၊ သာသနာပြုတယ် ဆိုတာ ဘုရားရှင် နှစ်သက်တော်မူတဲ့ ခွင့်ပြုတော်မူတဲ့
သာနာတည်တံ့ခြင်းမျိုး၊ သာသနာပြုခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘူးဗျာ့။
အဲဒီတော့ နှလုံးသားဝယ်ဘုရားတည် ဆိုတဲ့ ယောဆရာတော်ရဲ့ နှုတ်ခွန်းတော် အတိုင်း ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားမှာ သရဏဂုံမပျက်သရွေ့ ဘုရားတည်ပြီးသားပါဗျာ။
ဆိုတဲ့အတိုင်း ရတနာသုံးပါးရဲ့ ဂုဏ်ကိ်ု ကျေးဇူးမဲ့ ကဲ့ရဲ့တဲ့စကား လှောင်ပြောင်တဲ့စကား ပေါ့ပေါ့တန်တန် ဂရုဂါရ၀မထားတဲ့စကားအပြုအမူတွေကို ရှောင်ရှားကြရင်းနဲ့ ရတနာသုံးပါးကို စော်ကားလာသူတိုင်းကိုလည်း ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ပြောဆိုဆုံးမကြရအောင်လား အွန်လိုင်းမှ သူတော်ကောင်းတို့။
အနုပညာရှင်ဖြစ်ရင်လည်း အားမပေးဖို့ သူတို့ရဲ့ ထွက်သမျှခွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့နဲ့ နောင်အခါ ရှောင်ကြဉ်လာအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဘာသာရေး အသိစိတ်ဓါတ်မရှိတဲ့သူကို အသိစိတ်ဓါတ်တွေ ရှိလာအောင် ချစ်မြတ်နိုးတတ်လာအောင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လာအောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားကြရအောင်လားဗျာ။
ဓမ္မမိတ်ဆွေ-မစိုးရိမ်ကျောင်းသားဟောင်း စိုင်းသိင်္ခ ( တောင်ကြီး )
Posted by မေတ္တာတံခွန် at 10:41 PM 1 comment:
မေတ္တာတံခွန် | 7:45 AM | သုတ | အသငျးအကွောငျး 1 Comment so far
သာသနာနှဈ ၂၅၅၃ ခုနှဈ၊ သီတငျးကြှတျလပွညျ့ (အဘိဓမ်မာ အခါတျော)နေ့ (၃ အောကျတိုဘာ ၂၀၀၉) တှငျ
တဈသီးပုဂ်ဂလ ရဟနျးပုဂ်ဂိုလျ လူပုဂ်ဂိုလျမြား၊
ဓမ်မရံသီ နှငျ့ ဓမ်မရတနာ ဓမ်မကလောငျရှငျမြား အဖှဲ့၊
မွတျပနျးရဂုံ ဓမ်မကလောငျရှငျမြား အဖှဲ့၊
မတ်ေတာတံခှနျ အသငျး တို့ ပူးပေါငျး၍ ဖှဲ့စညျးတညျထောငျခဲ့ပါသညျ။
သီတငျးကြှတျလပွညျ့ကြျော ၁ ရကျ (၄အောကျတိုဘာ ၂၀၀၉) တှငျ
အသငျးခြုပျ၏ နာယက အဖှဲ့၊
အလုပျအမှုဆောငျအဖှဲ့တို့ကို ရှေးခယျြ၍ ဖှဲ့စညျး တညျထောငျခဲ့ပါသညျ။
Posted by မေတ္တာတံခွန် at 7:45 AM 1 comment:
ဆူးလေဦးမြင့်သိန်းဦးဆောင်ခဲ့သည့် ထေရ၀ါဒအမည်ခံ အဓမ...
ဗုဒ္ဓသာသနာကိုအန္တရာယ်ပြုနေသည့် အမျိုးဖျက်၊ ဘာသာဖျက်၊...
မိုးပွာဝိနိစ်ဆယ ကောကျနှုတျခကျြမြား (၄)
ပွညျထောငျစု သမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော နိုငျငံတျော သံဃမဟာနာယကအဖှဲ့က ရှေးခယျြဖှဲ့စညျးအပျသော နိုငျငံတျော သီးခွား ဝိနညျးဓိုရျအဖှဲ့ အမှတျ(၁၇/၂၀၁၁)-...
သာသနာဖကျြ မိုးပွာဂိုဏျး၏ နိဂုံး
ပွညျထောငျစုသမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော၊ နိုငျငံတျော သံဃမဟာနာယက အဖှဲ့မှ ဖှဲ့စညျးပေးအပျသော နိုငျငံတျော သီးခွား ဝိနညျးဓိုရျ အဖှဲ့ အမှတျ (၁၇။ ၂၀၁၁)...
တိတ်ထိဂိုဏျးဆရာ မိုးပွာဦးဉာဏအား ထောငျခတြာ မှနျကနျသောလုပျရပျတခုသာဖွဈ၏ - ၃ -
သာသနာတျော၌ အဓမ်မဝါဒီ အဝိနယဝါဒီမြား ပျေါပေါကျလာခဲ့ပွီဆိုလြှငျ အနုနညျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးရသညျလညျး ရှိသညျ။ အကွမျးနညျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးရသညျလညျး ရှိသညျ။ ...
`နမော တေ ပုရိသာဇညာ၊ နမော တေ ပုရိသုတ္တမ။ သဗ္ဗညူသိ မဟာဝီရ၊ လောကဇေဋ္ဌေ နရာသဘ။´ `ယောက်ျားအာဇာနည် ဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားအား၊ အရှင်ဘုရားအား...
မိုးပွာဝိနိစ်ဆယ ကောကျနုတျခကျြမြား ( ၁ )
ပွညျထောငျစု သမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော/ နိုငျငံတျော သီးခွား ဝိနညျးဓိုရျအဖှဲ့ / အမှတျ (၁၇/၂၀၁၁)က ဆုံးဖွတျတျောမူသညျ မိုးပွာဝိနိစ်ဆယ ကောကျနုတျခြ...